January 2017 | အလင်းမျက်ဝန်း ®
၀မ်းနည်းမှတ်တမ်း Aboalimosa Afghanistan Al-Afasy Austria Bahrain Bangladesh Canada Chad China Cuba Egypt Eid France Germany Google Greece Hollywood HRW IDU India Indonesia Iqbal Hossain Jibon Iran Iraq IS Israel Italy Japan Jordan Kuwait Lebanon Libya Lindsay Lohan Maher Zain Malaysia Maldives Mauritius Mexico Myanmar Nigeria OIC Oman Omar Esa Oscar Pakistan Palestine PEW Philippines Portugal Qatar Russia Saudi Arabia Scotland Senegal Singapore Somalia South Africa Spain Sri Lanka Sudan Sweden Switzerland Syria Thailand Tunisia Turkey UN United Arab Emirates United Kingdom United States of America Venezuela Video Vietnam Yemen ကဗျာ ကမ္ဘာ့သတင်း ကာတွန်း ကုရ်အာန် ကုလသမဂ္ဂ ကလေးသူငယ် ကျန်းမာရေး ငလျင် စပိန် စာပေမျက်ဝန်း စီးပွားရေး တူနီးရှား တူရ်ကီ ဒန်း ဒီနီယသ် ဓာတ်ပုံသတင်း နည်းပညာ နယ်သာလန် နာရေးအသိပေး ပညာရေး ပါကစ္စတန် ပါလက်စတိုင်း ပျဉ်းမနား ပျိုမေမွတ်စ်လင်မ် သြစတေးလျ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းဗလီ မက္ကဆီကို မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မွတ်စလင်မ်သတင်း မိတ္ထီလာ မိန့်ခွန်း မန္တလေး ယူနက်စ်ကို ပြင်သစ် ပြည်တွင်း မြန်မာ့သတင်း ရခိုင် ရင်ဖွင့်လွှာ ရန်ကုန် ရမသွာန် ရရှား ရသအလင်း ရိုမေးနီးယား လစ်ဗျား လသတင်း ဝတ္ထု ဝမ်းနည်းမှတ်တမ်း သတင်း သတင်းတို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သိပ္ပံ သိပ္ပံ/ပညာ သုခဘုံလမ်းညွှန် သုခုမမျက်ဝန်း သုတမျက်ဝန်း သုတအထွေထွေ ဟဂ်ျ ဟဒီးဆ်မျက်ဝန်း ဟလာလ်စားသောက်ဖွယ် အင်္ဂလန် အင်ဒိုနီးရှား အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီး အစ္စလာမ်နှင့်မီဒီယာ အစ္စရေး အထိမ်းအမှတ်နေ့ အထူးအစီအစဉ် အမျိုးသမီး အယ်ဒီတာ့မျက်ဝန်း အရဗီဘာသာစကားနေ့ အားကစား အာဖဂန် အာဖရိက အာဘော် အိုမန် အိုလမာ အိန္ဒိယ အီဂျစ် အီရတ် အီရန် အူရ်ဒူ အတွေးအမြင် အမေရိကန် အမေးအဖြေ အရှေ့အလယ်ပိုင်း အနုပညာ ဥရောပ ဆောင်းပါး ဆော်ဒီ တောင်တွင်းကြီးမြို့ နေပြည်တော် ပျော်ဘွယ် ဖျော်ဖြေရေး ကြေငြာချက် ကြော်ငြာ မေးမြန်းအဖြေရှာ နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံခြား
တစ်မူထူးခြားသော ပါကစ္စတန်နိုင်ငံက ကုရ်အာန်လင်းရောင်တော် တောင်တန်းကြီး
31.1.17 Pakistan , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ ကွေတာမြို့မှာ နူရွလ်ကုရ်အာန် (ကုရ်အာန်လင်းရောင်တော်) လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ တောင်ကုန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။
ကွေတာမြို့ရဲ့ အနောက်ဘက်ရှိ တောင်တန်းတွေထဲက ကျင်လ်သန်တောင်ရဲ့ အစွန်အဖျားမှာရှိနေတဲ့တောင်ကို နူရွလ်ကုရ်အာန် (ကုရ်အာန်လင်းရောင်တော်) တောင် လို့ သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။
တစ်နိုင်ငံလုံးက ဆွေးမြေ့ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ ကုရ်အာန်ကျမ်းစာတွေကို သူသူငါငါက လာရောက်သိမ်းဆည်းကြရာကနေ အဆိုပါကဲ့သို့ အမည်သညာတပ်ခေါ်လာကြတဲ့ နေရာတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါလုပ်ဆောင်မှုကို စတင်တာဟာ ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှာဖြစ်ပြီး ကိုယ်ထူကိုယ်ထအနေနဲ့ လူတစ်ချို့က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၎င်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာ အဆိုပါတောင်ကြီးထဲမှာ လှိုဏ်ဂူပေါင်း (၁၂၅) ခုတောင် ပြုလုပ်ထားခဲ့ကြပြီး စုစုပေါင်းအရှည်ဟာ သုံးကီလိုမီတာခွဲတောင် ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ တောင်ပေါ်လှိုဏ်ဂူ အဆောက်အဦးကြီးကို တည်ဆောက်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ပျက်စီးနေတဲ့၊ အခြေအနေမလှတော့တဲ့ ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်များအပါအဝင် ကျမ်းတော်မြတ်အတွင်းက ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ စာရွက်အပိုင်းအစတွေ၊ ကျမ်းတော်မြတ်အာယသ်တော်များပါဝင်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းဟောင်းတွေနဲ့ အခြားသော အစ္စလာမ်သာသနာရေးဆိုင်ရာ စာအုပ်စာပေဟောင်းတွေကို အမြတ်တနိုးထားပြီး သိမ်းဆည်းဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အမှတ်တရအဖြစ် ပြသလို့ရတဲ့ စာအုပ်စာတမ်းတွေကိုတော့ မှန်ခန်းတွေနဲ့ ထည့်သွင်းပြီး သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ ခင်းကျင်းပြသထားပါတယ်။
မှန်ခန်းတွေရဲ့ အောက်မှာတော့ ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြေ့သွားပြီဖြစ်တဲ့ သန်းနဲ့ချီတဲ့ ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်နဲ့တကွ ဘာသာရေးစာအုပ်စာပေဟောင်းတွေကို အိတ်တွေနဲ့ထည့်သွင်းပြီး စီရီစွာနဲ့ သိမ်းဆည်းထားပါတယ်။
Inews-0081/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » GEO TV
ခေတ်အဆက်ဆက်၊ ပစ်သတ်လည်း ဒိုမသေ
အကျိုးလို ညောင်ရေသွန်းတဲ့၊ မျိုးမဟုတ်ပေ
ဒီမြေမှာ ကြွေကျ၊ မြေခ တဲ့ ပန်းတွေ
မွှေးရနံ့ သွေးနံ့ပါပေမယ့်၊ မွှေးမပျက်လေ
ခေတ်သစ် ဂဠုန်၊ အမျိုးဂုဏ် တင်ချင်စမ်းလှ
လူကို ခွေးသတ်လေခြင်း။ ။
MMP-01/Jan-17 © အလင်းမျက်ဝန်း
ဦးကိုနီကွယ်လွန်ခြင်းအပေါ် အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီးမှ အကြောင်းကြားလွှာ ထုတ်ပြန်
30.1.17 Myanmar , ပြည်တွင်း , သတင်း , ကြေငြာချက်
ဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရပြီး ကွယ်လွန်ခြင်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီးမှ မွတ်စ်လင်မ်များအား အကြောင်းကြားလွှာတစ်စောင် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ရှေ့နေဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရပြီး ရှဟီးဒ်ဖြစ် ကွယ်လွန်
29.1.17 Myanmar , Video , ပြည်တွင်း , ဝမ်းနည်းမှတ်တမ်း , သတင်း
ရှေ့နေဦးကိုနီအား ယနေ့ ဇန်နဝါရီလ (၂၉) ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေ (၅) နာရီအချိန်ခန့်၌ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် Terminal-1 ရှေ့ လူသွားလမ်းပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် အသက် (၅၃) နှစ်အရွယ်ရှိ ကြည်လင်းဆိုသူမှ အသင့်ပါရှိသော (၉မမ) ပစ္စတိုသေနတ်ဖြင့် အသေအချာချိန်ရွယ်၍ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် နေရာမှာတင် ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
လုပ်ကြံခံရသူ ဦးကိုနီသည် နိုင်ငံတော်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဥပဒေအကြံပေးဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်ခရီးစဉ်အဖြစ် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသို့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေမြင့်၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးနှင့် (၈၈) မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင် ကိုမြအေးအပါအဝင် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ပြန်လည်ရောက်ရှိလာစဉ်မှာ ယခုလို ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းစွာ လုပ်ကြံခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးကိုနီအား နိုင်ငံတော်အစိုးရ VIP ယာဉ်တန်းဖြင့် လိုက်ပါစေရန် ခေါ်ဆောင်မှုကို လက်မခံဘဲ မိမိတွင် ရန်သူမရှိဟု ခံယူကာ မိသားစုအား လာရောက်ကြိုဆိုရန် ၎င်းမှ အကြောင်းကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး သူအလွန်ချစ်မြတ်နိုးသော (၂) နှစ်အရွယ် မောင်ဇေဝင့်ထည် (ခ) မိုဟမ္မဒ် အစ်ရ်ဖန်း ကို ခေါ်ခဲ့ပေးရန် တကူးတက မှာခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကွယ်လွန်သေဆုံးချိန်အထိ ၎င်းမြေးဖြစ်သူလေးအား ချီပွေ့ထားပြီး ကလေးငယ်အား ထိခိုက်မှုတစ်စုံတစ်ရာ မရှိခဲ့ဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ယခုအခါ ပစ်ခတ်လုပ်ကြံ၍ ထွက်ပြေးသူ ကြည်လင်း၊ အသက် (၅၃) နှစ်၊ (အဖ) ဦးလှိုင်၊ (အမိ) ဒေါ်ဖွားမြ၊ (နေရပ်) ၃၄-လမ်း၊ ပုဏ္ဏားကုန်းရပ်ကွက်၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့ အား (၉မမ) ပစ္စတို (၁) လက်နှင့် ကျည် (၉) တောင့်၊ (၅) လုံးပြုးသေနတ် (၁) လက်နှင့် ကျည် (၄) တောင့်တို့နှင့်အတူ လေဆိပ်တွင် ဖမ်းမိထားပြီး သက်ဆိုင်ရာမှ စစ်ဆေးမေးမြန်းနေတယ်လို့ ရဲသတင်းအရ သိရှိရပါတယ်။
အသက် (၆၄) နှစ်အရွယ် ရှဟီဒီ အဗ္ဗဒွလ်ဃနီ (ခ) ဦးကိုနီတွင် အသက် (၈၃) နှစ်အရွယ် မိခင်ကြီးအပါအဝင် ဇနီး၊ သားသမီးနှင့် မြေးများ ကျန်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ရှဟီဒီ အဗ္ဗဒွလ်ဃနီ (ခ) ဦးကိုနီရဲ့ ဂျနာဇာဟ် (နောက်ဆုံးဈာပန) ကိုတော့ နက်ဖန် ဇန်နဝါရီလ (၃၀) ရက် တနင်္လာနေ့ ညနေ အစွရ်နမားဇ်အပြီးအချိန် ရေဝေးကဘာရ်စတာန်ဥယျာဉ်သင်္ချိုင်းတော်ကို ပို့ဆောင်ဒဖ်နာမယ်လို့ ကနဦးသတင်းအရ သိရှိရပါတယ်။
ကျန်ုပ်တို့ အလင်းမျက်ဝန်းအနေဖြင့် ဤမှုခင်းအပေါ် နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှုအဖြစ် မှတ်ယူပါသည်။
မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် အသက်ပေးစတေးခဲ့ရသော အာဇာနည် (၉) ဦး ပြီးနောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် အသက်ပေးစတေးခဲ့ရသည့် တစ်ဦးတည်းသော နိုင်ငံ့အာဇာနည်ကြီးအဖြစ် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
ဤသည် မြန်မာမွတ်စ်လင်မ်များအတွက်သာမက ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွက်ပါ အစားထိုးမရတဲ့ တန်ဖိုးကြီးမားသော ဥပဒေပညာရှင်တစ်ဦးကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Mnews-004/17 © အလင်းမျက်ဝန်း
[info title="ကြည့်ရှုမှု အဆင်မပြေပါက" icon="exclamation-circle"] အလင်းမျက်ဝန်း You Tube Channel တွင်လည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ » https://youtu.be/SLxx7v7mXRs
ထရမ့်ရဲ့ဥပဒေကို ဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ ကနေဒါက ပြောင်းရွှေ့သူများကို လှိုက်လှဲစွာကြိုဆို
29.1.17 Canada , United States of America , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ် Justin Trudeau ဟာ စနေနေ့က အခုလို ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
“ ကနေဒါနိုင်ငံသားတွေဟာ အကြမ်းဖက်မှု၊ စစ်ပွဲ၊ ဒုက္ခတွေကနေ အလွတ်ရုံး ထွက်ပြေးလာတဲ့သူတွေကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုပါတယ်။ ”
အမေရိကသမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာ အစ္စလာမ့်နိုင်ငံ(၇)နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အီရတ်၊ အီရန်၊ လစ်ဗျား၊ ဆိုမားလီးယား၊ ဆူဒန်၊ ဆီးရီးယားနဲ့ ယီမင်နိုင်ငံတုိ့မှ အမေရိကန်ပြည် ထောင်စုထဲကို ခိုလှုံဖို့ရောက်ရှိလာတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို တားမြစ်တင်းကြပ်ထားတဲ့ လေးလတာ အာဏာသက်ရောက်စေမယ် ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက် တစ်ရက်အကြာမှာပဲ ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ် ရူဒိုက အခုလို ပြောကြားလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝန်ကြီးချုပ် Trudeau ၎င်းရဲ့ Twitter စာမျက်နှာပေါ်မှာလည်း အခုလို ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။
“ စစ်ပွဲ၊ အကြမ်းဖက်ခံရမှုနဲ့ ဒုက္ခတို့မှ လွတ်မြောက်ရာဆီ ခိုလှုံရာရှာနေသူများခင်ဗျား... ကျနော်တို့ ကနေဒါနိုင်ငံသားတွေဟာ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး ခင်ဗျားတို့ကို လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုကြပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ အင်အားဟာ မတူကွဲပြားမှုထဲမှာ ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကနေဒါနိုင်ငံက ခင်ဗျားတို့ကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုနေပါတယ်။ ”
အဆိုပါ နိုင်ငံ(၇)ခုမှ ခိုလှုံဖို့ ရောက်ရှိလာကြတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေအပေါ် အမေရိကန်သမ္မတသစ် ထရမ့်ပြဌာန်းလိုက်တဲ့ ဥပဒေဟာ အမေရိကန်ကို ဦးတည်ပြီး ခရီးထွက်လာတဲ့ ခရီးသည်တွေအတွက် လွန်စွာ ဒုက္ခဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
အခုတော့ သူတို့တစ်တွေဟာ လာရာလမ်းကြောင်းတွေကို ပြန်လှည့်ရတော့မလိုတောင် ဖြစ်နေကြပါပြီ။
ဒါ့အပြင် အဆိုပါ ပြဌာန်းချက်တွေဟာ ခွဲခြားတဲ့၊ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို စော်ကားတဲ့ ပြဌာန်းချက်တွေသာ ဖြစ်တယ်လို့ ခရီးသည်တွေဘက်က ကင်ပွန်းတပ်ကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အနောက်တိုင်းသားတွေရဲ့ မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ ပြင်သစ်၊ ဂျာမဏီတို့အပြင် အမေရိကန် အာရဗ်အုပ်စုများနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ပြစ်တင်ရှုတ်ချမှုကိုလည်း အကြီးအကျယ် ခံနေရပါတယ်။
နယူးယောက်မှာရှိတဲ့ လူဝင်မှု ပြဿနာတွေကို အထူးပြုကိုင်တွယ်နေတဲ့ အမေရိကန်ရှေ့နေတွေဟာလည်း ယင်းဥပဒေများကို ချုပ်ငြိမ်းသွားစေဖို့ အားထုတ်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။
ဒီဥပဒေကိုကိုင်တွယ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေဟာ တရားဥပဒေနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ပုံစံတွေနဲ့တောင် ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတွေ ပြုလုပ်လာကြတယ်လို့လည်း သက်သေတချို့က ပြောကြပါတယ်။
Inews-0080/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » العربية
စွလာသ်ဝတ်ပြုဖို့ နားချိန်မပေးသည့်ကုမ္ပဏီ ပြစ်မှုထင်ရှားရင် ကန်ဒေါ်လာ နှစ်သိန်းခွဲ ဒဏ်ရိုက်ခံရမည်
29.1.17 United States of America , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ စွလာသ်ဝတ်ပြုဆောက်တည်ဖို့ နားချိန်မပေးသည့် ကုမ္ပဏီကို ဝန်ထမ်းများက ကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်၍ လွတ်လပ်မှုဆုံးရှုံးကြောင်း သက်ဆိုင်ရာမှာ စွဲချက်တင်လိုက်ပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်ကို ဂျွန်အက်ဖ်ကနေဒီ နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကြီးမှာ အများပြည်သူလွယ်ကူချောမွေ့ရေး ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီက မွတ်စ်လင်မ်ဝန်ထမ်းတွေက ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီဟာ လေဆိပ်အတွင်း ခရီးသည်သုံး လက်တွန်းလှည်းများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာဖြစ်ပြီး မွတ်စ်လင်မ် ဝန်ထမ်းတွေကို နမားဇ်ဝတ်ပြုဖို့ ခေတ္တအချိန်ကိုပင် ခွင့်မပြုမပေးတာကြောင့် ဒါဇင်ပေါင်းများစွာသော မွတ်စ်လင်မ်ဝန်ထမ်းတွေစုပေါင်းပြီး လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကို တင်ပြတိုင်တန်းခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါတင်ပြတိုင်ကြားလွှာအတွင်း ၎င်းတို့ရဲ့ ရပ်တည်ချက်ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ကြရာမှာတော့ ကုမ္ပဏီဟာ စွလာသ်ဆောက်တည်ဖို့အတွက် ခေတ္တနားချိန်မျှပင် မပေးခြင်းဟာ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါကိစ္စအား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှ ဘာသာရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုအဖြစ် တိုင်ကြားလွှာကိုလက်ခံကာ စွဲချက်တင်လိုက်ပြီး လိုအပ်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကို စတင်ပြုလုပ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍သာ ပြစ်မှုအဖြစ် ထင်ရှားခဲ့ပါက ၎င်းကုမ္ပဏီဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ နှစ်သိန်းခွဲလောက်ထိ ဒဏ်ရိုက်ခံရဖွယ်ရှိနေပါတယ်။
Inews-0079/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » GEO TV
မွတ်စ်လင်မ်တွေကို အတင်းအဓမ္မ စစ်ဆေးသည့်အတွက် အမေရိကန်တွင် ပြင်ပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြ
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ မွတ်စ်လင်မ်နိုင်ငံ (၇) ခုမှ ဝင်ရောက်လာတဲ့ နိုင်ငံသားတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် စစ်ဆေးလေ့လာစောင့်ကြည့်ဖို့ ဗဟိုအစိုးရရဲ့ အမိန့်ထုတ်ပြန်မှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ မွတ်စ်လင်မ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေဘက်ကနေ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီမိုကရက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာအာစွိဖ်မဟ်မူဒ်က အခုလို ပြောပြပါတယ်။
“ ဒီအမိန့်စာဟာ မွတ်စ်လင်မ်တွေကို တားမြစ်ဖို့အတွက်ပဲ သီးသန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ ဒီအမိန့်စာကြောင့် ဒီမှာနေထိုင်တဲ့ မွတ်စ်လင်မ်တွေအပေါ်မှာလည်း ရိုက်ခတ်မှုတွေ ရှိလာပါတယ်။ ”
“ ထရမ့်ဟာ မက်စီကိုနဲ့အတူ မွတ်စ်လင်မ်တွေကိုပါ ဆန့်ကျင်ပြီး အစွန်းရောက်မှုကိုအခြေပြုတဲ့ တကယ့်တံတိုင်းကြီးတစ်ခုကို တည်ဆောက်လိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ”
ကန့်ကွက်မှုမှ ဦးဆောင်ပါဝင်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ပါမောက္ခ အာဒိလ်နဂ်ျမ်ကလည်း အခုလို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ ဒီအမိန့်ပြန်ဌာန်းချက်ဟာ တကယ်တော့ မွတ်စ်လင်မ်တွေကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ကြဖို့ လှုံ့ဆော်လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို အခြေခံပြီးတော့ အမေရိကန်က အစိုးရဝန်ထမ်းတွေဟာ မွတ်စ်လင်မ်တွေကို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်လာနိုင်ဖွယ် ရှိနေပါတယ်။ ”
Inews-0078/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » GEO TV
ကမ္ဘာကြီးဟာ ငါးနိုင်ငံမကပါဘူးဆိုတဲ့ တူရ်ကီသမ္မတကြီးနဲ့ လင်ဆေးလိုဟန်
28.1.17 Hollywood , Lindsay Lohan , Turkey , သတင်း , အနုပညာ , နိုင်ငံတကာ
ကမ္ဘာကျော် ဟော်လီဝုဒ်မင်းသမီး လင်ဆေးလိုဟန်ဟာ သောကြာနေ့က (ကမ္ဘာကြီးဟာ ငါးနိုင်ငံမကပါဘူး) လို့ ရေးသားထားတဲ့ အမှတ်တရလည်းစွဲလေးကို တူရ်ကီသမ္မတကြီး အာဒိုဂန်ကို လက်ဆောင်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီစာသားရဲ့ အလိုသဘောကတော့ “ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ အနာဂတ်ဟာ ကုလသမ္မဂ္ဂမှာ ဗီတိုအာဏာရယူထားတဲ့ နိုင်ငံကြီးငါးနိုင်ငံရဲ့ ချယ်လှယ်မှုအောက်မှာပဲ ရှိနေရမယ်ဆိုတာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ” ဆိုတာကို ဖော်ကျူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစကားကို တူရ်ကီသမ္မတကြီးအာဒိုဂန်ဟာ အခမ်းအနားတော်တော်များများမှာ လူသိရှင်ကြား ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလေ့ ရှိပါတယ်။
တူရ်ကီသမ္မတကြီး အာဒိုဂန်နဲ့ ဇနီး အမီနာအာဒိုဂန်ဟာ အန်ကာရာမှာပြုလုပ်တဲ့ နိုင်ငံတော် အခမ်းအနားတစ်ခုမှာ မီဒီယာတွေမပါဘဲ မင်းသမီးလင်ဆေးလိုဟန်နဲ့ သီးခြားတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲဒီလိုတွေ့ဆုံစဉ်မှာ မင်းသမီးက သမ္မတကြီးအာဒိုဂန်ကို အထက်ပါလည်စွဲလေးကို လက်ဆောင်အဖြစ် အမှတ်တရ ပေးအပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တူရ်ကီသမ္မတ ရဂျဗ်သွိုင်ယိဗ်အာဒိုဂန်ဟာ ကမ္ဘာကျော် ဆီးရီးယား နိုင်ငံသူလေး ဘာနဟ်အာဗိဒါနဲ့ အတူတကွ မင်းသမီးလင်ဆေးလိုဟန်ကိုလည်း တွေ့ဆုံခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသက်(၇)နှစ်အရွယ်သာ ရှိသေးတဲ့ ဘာနဟ်အာဗိဒါလေးဟာ သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်ကနေ ဆီးရီးယားမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ စစ်ရာဇဝတ်မှုဓာတ်ပုံတွေကို ဖြန့်ချိရာကနေ ကမ္ဘာကျော်ဆယ်လီကလေးတစ်ဦးအဖြစ် ထင်ရှားလာသူ ဖြစ်ပါတယ်။ (ဤနေရာကို နှိပ်၍ ဘာနဟ်အာဗိဒါအကြောင်း ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်)
လိုဟန်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလတုန်းက မြို့တော်အစ္စတန်ဘူလ်က ဆီးရီးယားဒုက္ခသည် စခန်းတွေမှာ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပြီး ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလို ဆုံတွေ့ခဲ့စဉ်ကလည်း သူမက ကမ္ဘာကြီးဟာ နိုင်ငံငါးနိုင်ငံ မကပါဘူးဆိုတဲ့ စကားလေးကို ပြောကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။
Inews-0077/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » سكاي نيوز عربية
ပဲရစ်လမ်းမများပေါ်သို့ မောင်းသူမဲ့ ခရီးသည်တင် ဘတ်စ်ကားများ ရောက်ရှိလာခဲ့
28.1.17 France , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးမှာ YBS ကားတွေ ပြေးဆွဲနေသလို ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ပဲရစ်မြို့တော်ကြီးရဲ့ လမ်းမတွေပေါ်မှာလည်း မောင်းသူမဲ့ ခရီးသည်တင် ဘတ်စ်ကားများ သွားလာနေတာကို တွေ့ကြရမှာပါ။
အော်တိုလျှပ်စစ်မီနီဘတ်စ်ကားတွေဟာ နှစ်လမ်းမောင်းပေါ် စုံညီဆန်ညီ မောင်းနှင်သွားလာနေကြပါတယ်။
အဆိုပါ မောင်းသူမဲ့ကားတစ်စီးမှာ ခရီးသည်ခြောက်ဦးထိုင်ပြီး ခရီးသွားလာနိုင်ပါတယ်။
အခုအခါမှာတော့ အဆိုပါ မောင်းသူမဲ့ ဘတ်စ်ကားလေးတွေဟာ မီတာ (၂၀၀) ကျယ်ဝန်းတဲ့ နှစ်လမ်းမောင်းလမ်းမကြီးအပေါ်မှာပဲ ပြေးဆွဲပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီကားလေးတွေကို ပဲရစ်မြို့တော်ကြီးရဲ့ လူအများသွားလာအသုံးပြုနေကြတဲ့ လမ်းများကြီးတွေအပေါ်မှာ မမောင်းခင်အထိ သုံးလကြာအောင် ဒီလမ်းမကြီးပေါ်မှာ အသေအချာ စမ်းသပ်မောင်းနှင်သွားကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Inews-0076/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » GEO TV
နိုင်ငံရွှေ့ပြောင်းစွန့်ခွာလာသူတွေကို ပြည်ဝင်ခွင့် ပိတ်ပင်တဲ့အပေါ် ဝမ်းနည်းကြောင်း မာလာလာ ပြောကြား
28.1.17 Pakistan , United States of America , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
မွတ်စ်လင်မ်နိုင်ငံ (၇) နိုင်ငံက ရွှေ့ပြောင်းလာသူတွေကို ပြည်ဝင်ခွင့် ပိတ်မယ်ဆိုတဲ့ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြောင်း နိုဘယ်ဆုရှင် မာလာလာယူစွတ်ဖ်က ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
မာလာလာယူစွတ်ဖ်က အခုလို ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ ရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်တွေကို ဗီဇာပိတ်မယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ ကျွန်မနှလုံးသားကို ထိခိုက်ကြေကွဲစေခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာ စစ်ရဲ့သားကောင်ဖြစ်နေရတဲ့ အပြစ်မဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ကလေးတွေအတွက် မျှော်လင့်ချက်တံခါးကို ပိတ်ဆို့လိုက်သလိုပါပဲ။ ဒါဟာ လုံးဝကို မယုံနိုင်စရာပါပဲ။ ”
အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်အနေနဲ့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်လို့လည်း မာလာလာက တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
Inews-0075/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » GEO TV
တရုတ်ပြည်မှာ ဆန်သူခိုးတွေကို ဖမ်းဆီးပြီး လူမြင်ကွင်းမှာ ချိတ်ဆွဲပြသ
28.1.17 China , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
တရုတ်ပြည်ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်မီဒီယာတွေအပေါ်မှာ ခိုးသားတွေကို ဖမ်းဆီးမိပြီးနောက်ပိုင်း သူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေ တက်လာပါတယ်။
သူတို့ဟာ ကုန်စုံဆိုင်တစ်ခုကနေ ဆန်တွေကို ခိုးယူနေစဉ် အဖမ်းခံလိုက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖမ်းဆီးမိပြီးနောက်မှာတော့ ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေက သူတို့ကို ကြိုးတွေနဲ့ ချည်နှောင်ပြီး လူမြင်ကွင်းမှာ တွဲလောင်းချိတ်ဆွဲ ပြသခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်မှာလည်း စာတွေကိုရေးသား ချိတ်ဆွဲခံထားကြရပါတယ်။
အဲဒီကြေညာချက်ထဲမှာတော့ “ ကျနော်တို့ နောက်နောင် အခုလို ဆန်ခိုးမစားတော့ပါဘူး ” လို့ ရေးသားထားပါတယ်။
အခုလိုပြုလုပ်ပြီးနောက်မှာတော့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွေအပြင် မီဒီယာတွေပေါ်မှာပါ ငိုအားထက် ရယ်အားသန်စေတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်အဖြစ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် နေရာယူခဲ့ပြီး အဆိုပါပုံတွေနဲ့သတင်းတွေဟာ လူတွေကို ပျော်ရွှင်စေခဲ့ရပါတယ်။
အဆိုပါ ဆန်ခိုးသားတွေဟာ လူတွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ သူတို့ဟာ အိမ်ကြွက်ကလေးနှစ်ကောင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (ဓာတ်ပုံကို အောက်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်)
Inews-0074/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » GEO TV
အော်စကာဆုရှင် အီရန်မင်းသမီးဟာ ဆုပေးပွဲ မတက်ရောက်ဘဲ ထရမ့်ကိုဆန္ဒပြမည်
27.1.17 Iran , United States of America , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
ယခုနှစ် (၂၀၁၇) ရဲ့ အကောင်းဆုံး နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင် အော်စကာဆုအဖြစ် စာရင်းတင်သွင်းခံထားရတဲ့ “ အလ်ဗာအီဒ် ” ရုပ်ရုင်ဇာတ်ကားရဲ့ အဓိကဇာတ်ဆောင် ဟီးရိုးအဖြစ် အီရန်ရုပ်ရှင်မင်းသမီး သရာနဟ်အလီဒီုးစ်သီ ကို ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
သူမဟာ အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ မွတ်စလင်မ်နိုင်ငံတချို့ကို ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ ခေတ္တရပ်ဆိုင်းလိုက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် ကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ မကြာမီ ကျင်းပတော့မယ့် ကမ္ဘာကျော် အော်စကာ ရုပ်ရှင်ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားကို တက်ရောက်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
အသက်(၃၃)နှစ်အရွယ်ရှိ မင်းသမီးသရာနာဟ်က “ ထရမ့်အနေနဲ့ အီရန်နိုင်ငံသားတွေကို ဝင်ခွင့်ဗီဇာမပေးဘဲ ရပ်ဆိုင်းပိတ်ပင်လိုက်တာဟာ ကျမ ဒီလိုလုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက် အဓိကတွန်းအားဖြစ်စေခဲ့တာပါ။ ဒီကိစ္စဟာ အနုပညာအစည်းအရုံးတွေနဲ့ သက်ဆိုင်တာဖြစ်ဖြစ်၊ မသက်ဆိုင်တာဖြစ်ဖြစ် ကျမကတော့ ပုဂ္ဂလိကသဘောဆန္ဒအရပဲ အခု ဒီအခမ်းအနားကို ပါဝင်ပေးဖို့ ဆန္ဒမရှိတော့ပါဘူး ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတက ပြီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က IBC သတင်းဌာနရဲ့ ရုပ်သံသတင်းမှာ အကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရင်ဆိုင်လှုပ်ရှားနေတဲ့နိုင်ငံတွေကို ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပိတ်ပင်ဖို့ အဓိကပစ်မှတ်ထားခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ အလ်ဗာအီဒ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာ နာမည်ကျော် အီရန်ထုတ်လုပ်သူနဲ့ ဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့ အစ်ွဂရ်ဖရ်ဟာဒီက ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး လော့စ်အိန်ဂျလီစ်မြို့မှာ လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီ (၂၆) ရက်မှာ ကျင်းပမယ့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အော်စကာရုပ်ရှင်ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားမှာ အကောင်းဆုံးသော နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ဆုရဲ့ အမည်စာရင်းနေရာမှာ တင်သွင်းခံထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ဒါရိုက်တာ ဖရ်ဟာဒီဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တုန်းကလည်း သူရိုက်ကူးထုတ်လုပ်တဲ့ အင်န်ဖိစွာလ် အမည်ရှိတဲ့ ဇာတ်ကားနဲ့လည်း ယခုလို အကောင်းဆုံး နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင် အော်စကာဆုကို ရရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။
Inews-0073/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » العربية
အရှေ့အလယ်ပိုင်းကိစ္စတွေမှာ ထရမ့်အစိုးရ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှ အမေရိကန်အကျိုး ကာကွယ်နိုင်မည်
26.1.17 France , Saudi Arabia , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
ဆော်ဒီနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီး အာဒိလ်ဂျိုဗိုင်ရ်နဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးတို့ ရိယာဒ်မြို့တော်မှာ ပူးတွဲကျင်းပတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်း ပြင်သစ်ဝန်ကြီးက သတင်းထောက်များကို အခုလို ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
“ အရှေ့အလယ်ပိုင်း ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် ထရမ့်အစိုးရဟာ အခြားသော ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးမလုပ်ဘဲ သူ့သဘောအတိုင်းပဲ လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ သူ့အနေနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို လုံခြုံအောင် ကာကွယ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ”
ဆော်ဒီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျိုဗိုင်ရ်ကလည်း မိမိတို့အနေနဲ့ ထရမ့်အစိုးရသစ်အပေါ် မျှော်လင့်ထားကြောင်းနဲ့ ဒေသတွင်း အင်အားစုတွေဟာ ထရမ့်အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းပြီး လုပ်ကိုင်နိုင်ကြဖို့ မျှော်လင့်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
“ ထရမ့်အစိုးရအနေနဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ လက်တွဲညီညီ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ထရမ့်ဖွဲ့စည်းတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်း ယုံကြည်ပေးပါမယ်။ ”
Inews-0072/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » GEO TV
အစိုးရကျောင်းတွေမှာ ပုဝါဆောင်းဖို့ အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်းကို ရရှားပညာရေးဝန်ကြီး ပါဝင်ကူညီပေး
26.1.17 Russia , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
ရရှားနိုင်ငံ ပညာရေးဝန်ကြီးက ကျောင်းတွေမှာ မွတ်စ်လင်မ် ဆရာမတွေနဲ့ ကျောင်းသူတွေ ပုဝါဆောင်းဖို့ အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်းကို အားပေးကူညီခဲ့ပါတယ်။
ရရှားနိုင်ငံ ပညာရေးဝန်ကြီး အောင်ဂလာဝီးစ်စင်လ်ဝါ ပြောပြတာက “ ရရှားနိုင်ငံရဲ့ ပညာသင်ကြားရေးစနစ်ဟာ ဘာသာရေးခွဲခြားမှုအမျိုးမျိုးကနေ ကင်းစင်နေရပါမယ်။ မွတ်စ်လင်မ်မိန်းကလေးတွေ ပုဝါဆောင်းတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာ ပညာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘဲ ဘာသာတရားရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအဆုံးအမသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ”
မရ်ဒဝီယာဒေသရှိ ကျောင်းပေါင်းစုံကော်မတီမှ ပုဝါနဲ့ ခေါင်းဆောင်းပါ ဝတ်ရုံကို မွတ်စ်လင်မ် ပညာရေးဝန်းထမ်းတွေနဲ့ ကျောင်းသူတွေအတွက် ယူနီဖောင်းအဖြစ် ပြဌာန်းခဲ့ပြီးနောက် ပညာရေးဝန်ကြီးဟာ ဟောပြောမှုတစ်ခုအတွင်း အခုလို ထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
“ ရုရှားနိုင်ငံဟာ ကျောင်းတွေမှာ ဒေသခံတွေ ဝတ်ဆင်နေကြတဲ့ အဝတ်အစားတွေထဲက ခေါင်းပေါင်းပုဝါသာ မဟုတ်ဘဲ ဂျင်းဘောင်းဘီ၊ စကပ်တိုနဲ့ တခြားသော ဘယ်လိုဝတ်စားဆင်ယင်မှုမျိုးကိုမဆို ဘာသာတရားတစ်ခုခုရဲ့ သင်္ကေတလက္ခဏာလို့ မှတ်ယူမယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒီအဝတ်အစားကို ယူနီဖောင်းအဖြစ် သက်ဆိုင်သူတွေ ဝတ်ဆင်စေဖို့အတွက် ဥပဒေထုတ်ပြန်သွားမှာပါ ” လို့ ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသွားပါတယ်။
Inews-0071/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » GEO TV
ဂွါတာနမို အကျဉ်းစခန်းမှာ ထိန်းသိမ်းခံထားရသော မိမိနိုင်ငံသားကို ဆော်ဒီ ပြန်လည်တောင်းခံ
26.1.17 Saudi Arabia , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားနိုင်ငံရဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဂွါတာနာမိုအကျဉ်းစခန်းမှာ ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ မိမိနိုင်ငံသားတစ်ဦးကို မိမိတို့အမိနိုင်ငံတော်ထံကို ပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးဖို့ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
ဒီကြေငြာချက်အရ အမေရိကန်ရဲ့ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းကို ခံထားရတဲ့ အကျဉ်းသား ဂျဗ်ရာန်ကဟ်သွာနီဟာ ကြာသပတေးနေ့က မိမိတို့နိုင်ငံဆီကို ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမှာ အသေအချာပဲဆိုတာ ခိုင်ခိုင်မာမာ ယုံကြည်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ ကဟ်သွာနီကို ဖမ်းဆီးထားသူတွေဟာ မိမိတို့ထံ လက်တွေ့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးကြပါလိမ့်မယ်။ သူနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အရေးတကြီး အကြောင်းခံအားလုံးကိုလည်း လွယ်ကူအောင် ဖန်တီးထားပြီးပါပြီ။ ” လို့ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်က ဆိုပါတယ်။
ဆော်ဒီနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူ အကျဉ်းသားအမှတ် (၁၂၆) မုဟမ္မဒ် ကဟ်သွာနီက အခုထိတိုင် အမေရိကန်တွေရဲ့ ဂွာတာနာမို အကျဉ်းထောင်အတွင်း ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ ဆော်ဒီနိုင်ငံသား(၇)ဦးအထိ ကျန်ရှိနေသေးကြောင်း အတည်ပြု ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
Inews-0070/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » العربية
ကအ်ဗဟ်ရဲ့ အိမာမ်ဆပ်ကြီးက ဂါနင်မ်မိဖ်သာဟ်လေးကို ဘာတွေ မိန့်ခြွေလိုက်သလဲ?
25.1.17 Qatar , Saudi Arabia , Video , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
ဒီရက်ပိုင်းမှာတော့ ကာတာက ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်း မပါဘဲ အသက်ရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကျော် သတ္တိခဲလုလင်လေး ဂါနင်မ်မိဖ်သာဟ်ရဲ့ အွမ်ရဟ်ခရီးစဉ် ဗီဒီယိုဖိုင်လ်တွေဟာ ဟိုးလေးတစ်ကျော် ဖြစ်နေပါတယ်။
ဂါနင်မ်လေးဟာ မိမိရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုထောက်ပြီး ကအ်ဗဟ်ကျောင်းတော်ကြီးကို သွဝါးဖ်လှည့်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့ကြောင့် အခြားသွဝါးဖ်လုပ်တဲ့သူတွေ ကြပ်သွားမှာကို စိုးရိမ်တဲ့အတွက် လုံခြုံရေးတွေက လွယ်ကူအောင် စီစဉ်ပေးခဲ့တဲ့ ဘီးတပ်ထိုင်ခုံလေးအပေါ်မှာတောင်ထိုင်ပြီး သွဝါးဖ်မလုပ်ဘဲ သူ့လက်နဲ့သူပဲ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ကအ်ဗဟ်ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ အိမာမ်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ မာဟိရ်မုအိုင်ကိလီဟာ အဆိုပါ ဂါနင်မ်မိဖ်သာဟ်လေးကို အခုလို နှစ်သိမ့်အားပေး ဆုတောင်းစကားကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
“ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သခင်က မင်းကလေးကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပါစေကွယ်။ မကောင်းမှုဟူသရွေ့ကနေ လွတ်ကင်းအေးချမ်းမှု ပြုပေးပါစေ။ အလ္လာဟ်နာမံတော်ကိုင်တွယ်ပြီး ငါပြောပါတယ်။ မင်းနဲ့တွေ့ရလို့ ငါအရမ်းကို ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ မင်းကလေးအပေါ် ငြိမ်းချမ်းသာယာမှုအပေါင်း ခညောင်းပါစေနော်။ ငါမင်းကလေးရဲ့သတင်းတွေကို ကြားရတဲ့အခါတိုင်းမှာ လန်းဆန်းရှင်သန်ပြီး၊ သာယာမှုတွေ ရရှိပါစေလို့ ဆုတောင်းဒုအာပြုပေးပါမယ်ကွာ။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သခင်ဟာ မင်းကို ပျော်ရွှင်အောင် ထားရှိပေးပါစေ။ ငါတို့ထံကရော မင်းဆီကပါ ကောင်းမြတ်တဲ့ ကျင့်ဆောင်မှုတွေကို တို့သခင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် နှစ်သက်လက်ခံသဘောတူတော်မူပါစေကွယ်။ ”
လုလင်လေး ဂါနင်မ်မိဖ်သာဟ်ဟာ လက်တွေ့ကျတဲ့ လှုပ်ရှားတက်ကြွမှုဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအမြောက်အမြားမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်ကြောင်း သတင်းမီဒီယာတွေက ဖော်ပြကြပါတယ်။
သူဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလတုန်းက ဒူဘိုင်းမှာ ကျင်းပတဲ့ အရဗ်မြို့ရွာဒေသများဆိုင်ရာ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုလည်း အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် ပါဝင်တက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
Inews-0069/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » العربية
[info title="ကြည့်ရှုမှု အဆင်မပြေပါက" icon="exclamation-circle"] အလင်းမျက်ဝန်း You Tube Channel တွင်လည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ » https://youtu.be/EF4gvVU5J00
ထရမ့်တက်လာပြီးနောက် အစ္စရေးမှ အိမ်ရာသစ် ၂၅၀၀ ကျူးကျော်ဆောက်လုပ်
25.1.17 Israel , Palestine , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် နေတန်ယာဟုက အိမ်ရာအသစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ အထိ ထပ်မံကျူးကျော်တိုးချဲ့ပြီး ဆောက်လုပ်မယ့်အစီအစဉ်ကို အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။
ဒီခြေလှမ်းဟာ အရဗ်ကမ္ဘာနဲ့ နိုင်ငံတကာကို စော်ကားသိက္ခာချလိုခြင်းသာ ဖြစ်တယ်လို့ မှတ်ယူကြောင်းနဲ့ အပြင်းအထန် ရှုတ်ချကြောင်း ပါလက်စ်တိုင်းလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့က ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
အစ္စရေးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရဲ့ ပြောဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ အဆိုပါလုပ်ရပ်ဟာ မိမိတို့ နေ့စဉ်နေထိုင်ရှင်သန်ဖို့အတွက် လိုအပ်ချက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အစ္စရေးမီဒီယာများရဲ့ အဆိုအရ အနောက်ဂျေရုစလင်မ်မှာ ဆောက်လုပ်မဲ့ ကျူးကျော်အိမ်ရာတွေထဲက အိမ်(၁၀၀)ဟာ သမ္မတသစ်ထရမ့်ရဲ့သားမက်ဖြစ်သူ ဂျာရီဒ်ကိုရှီနရ် မိသားစုရဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနဲ့ ဆောက်လုပ်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါဟာ ထရမ့်သမ္မတဖြစ်ပြီးနောက် ပါလက်စ်တိုင်းနယ်မြေမှာ အစ္စရေးကျူးကျော်အိမ်ရာဆောက်လုပ်ဖို့ ဒုတိယမြောက် စီမံကိန်းကို အကောင်အထည် ဖော်လိုက်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျေရုစလင်မ်က ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ နေရာတွေမှာ အိမ်ရာတန်းကြီး (၆၀၀) လောက် တည်ဆောက်လုပ်ဖို့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကတည်းက အစ္စရေးကျူးကျော်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို မီးစိမ်းပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး အဖီဂဒူရ်လီမာန်က အိမ်ရာသစ်ဆောက်လုပ်ဖို့ ကြေညာပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် နေတန်ယာဟုကလည်း သူ့ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာပေါ်မှာ အခုလို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
“ ငါတို့ အိမ်သစ်တွေ တည်ဆောက်မယ်။ ဆက်ပြီးတော့ ငါတို့အတွက် အဆောက်အအုံတွေကို ဆောက်လုပ်သွားမယ်။ ”
Inews-0068/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » قناة الجزيرة
အမေရိကန်ထဲ မွတ်စ်လင်မ်များ ဝင်ရောက်ခြင်းကို ပိတ်ပင်မည့်ထရမ့် ဥပဒေမူကြမ်းကို ယနေ့လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်
25.1.17 United States of America , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
အမေရိကန်သမ္မတသစ် ဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာ ၎င်းမဲဆွယ်စဉ်တုန်းက စည်းရုံးပြောဆိုခဲ့တဲ့ကတိအတိုင်း အကြမ်းဖက်ခံဒေသများမှ ပြောင်းရွှေ့လာမယ့် မွတ်စ်လင်မ်တွေအနေနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထဲ ဝင်ရောက်လာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှိရင်းစွဲ စည်းကမ်းဥပဒေတွေကို ထပ်မံတင်းကြပ်ပြဌာန်းထားတဲ့ ပြင်ဆင်ချက်တွေအား အတည်ပြုပြဌာန်းနိုင်ရေးအတွက် သမ္မတသစ်အနေနဲ့ ယနေ့ လက်မှတ်ရေးထိုးသွားမယ်လို့ အမေရိကန် ကွန်ဂရက်က သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ထရမ့်လုပ်ဆောင်မယ့်ကိစ္စတွေထဲမှာ ဒုက္ခသည်တွေ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထဲ ဝင်ရောက်ခိုလှုံခွင့်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို ပြင်ဆင်ပြဌာန်းရမယ့်ကိစ္စတွေအပြင် အီရတ်၊ အီရန်၊ လစ်ဗျား၊ ဆိုမားလီးယား၊ ဆူဒန်၊ ဆီးရီးယားနဲ့ ယီမင်တို့ကနေ ဗီဇာကိုင်ဆောင်၍ ဝင်ရောက်လာသူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှိရင်းစွဲ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ကန့်သတ်ချက်တွေထပ် ပိုမိုတင်းကြပ်တဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ ချမှတ်ရေးကိစ္စတွေ ပါဝင်နေတယ်လို့ ကွန်ဂရက်ကို ကူညီပံ့ပိုးနေသူတွေနဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအပိုင်းက ကျွမ်းကျင်သူတွေက ပြောပါတယ်။
Inews-0067/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » قناة الجزيرة
အမေရိကန်သံရုံး ဗိုင်သွလ်မုက္ကဒ္ဒတ်စ်သို့ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းကြောင့် ရလဒ်ဆိုးများ ထွက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ ကမ္ဘာ့အိုလမာညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ကြီးမှ ပြင်းထန်စွာ သတိပေး
25.1.17 Israel , Palestine , United States of America , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
အမေရိကန်သံရုံး ဗိုင်သွလ်မုက္ကဒ္ဒတ်စ်သို့ ပြောင်းရွှေ့မှုကြောင့် ဆိုးရွားသောရလဒ်များ ပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်လို့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိုလမာ အစ္စလာမ်သာသနာ့ပညာရှင်များ ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ကြီးက ပြင်းပြင်းထန်ထန် သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိုလမာ အစ္စလာမ်သာသနာ့ပညာရှင်များ ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ကြီးက အမေရိကန်သံရုံးကို ဂျေရုစလင်မ်မြို့သို့ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းအားဖြင့် နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးဆက်တွေ ပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်လို့ သတိပေးလိုက်ပြီး အစ္စလာမ့်လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်လုံးကိုလည်း မိမိတို့ရဲ့ ပထမအဓိက တာဝန်အား ကျေပွန်ကြဖို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။
ထို့အတူ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ အနေနဲ့ ပါလက်စ်တိုင်းတွေရဲ့ တရားဥပဒေနဲ့ညီတဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ကာကွယ်ပေးကြဖို့အတွက်လည်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
အစ္စလာမ့်အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းမှာ ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ မညီညွတ်မှု အကွဲကွဲအပြဲပြဲဖြစ်နေမှုကပဲ အခွင့်အရေးသမားတွေကို မွတ်စ်လင်မ်ထုအား ပိုပြီးအင်အားချည့်နဲ့အောင်လုပ်ဖို့နဲ့ အမြတ်ထုတ်ဖို့အတွက် နေရာပေးနေသလိုပါပဲ။
အမေရိကန်သံရုံးကို ဂျေရုစလင်မ်ကို ရွေ့ပြောင်းမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာလည်း ဒီထဲမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။
ဒါဟာဆိုရင် ကုလသမ္မဂ္ဂရဲ့ ဥပဒေနဲ့ညီတဲ့ အတည်ပြုသဘောတူညီချက်တွေနဲ့ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ဆန့်ကျင်နေပါတယ်။
ဒါကြောင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိုလမာ အစ္စလာမ်သာသနာ့ပညာရှင်များ ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ကြီးက အောက်ပါအတိုင်း ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
အမေရိကန်သံရုံးကို ဂျေရုစလင်သို့ ရွှေ့ပြောင်းမဲ့ကိစ္စကို မွတ်စ်လင်မ်တစ်ရပ်လုံးမှာရှိကြတဲ့ ပညာရှင်တွေ၊ အတွေးအခေါ်ရှင်တွေနဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံး ဘယ်သူမှ လက်မခံပါဘူး။ ဒီကိစ္စကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ပေါ်ပေါက်လာမဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကြိုတင်သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ပါလက်စ်တိုင်းပြည်သူတွေအပေါ် မတရားလုပ်သူတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်က အမုန်းတရားမီးတွေ လောင်မြိုက်လာစေပါလိမ့်မယ်။
ဂျေရုစလင်မ်မှာ မတရားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ ဂျူးတွေရဲ့ ဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ်တွေအားလုံးအပြင် အခြားသော ပါလက်စ်တိုင်းနယ်မြေတွေမှာ ကျူးလွန်နေတဲ့ သတ်ဖြတ်မှုတွေ၊ ထင်ရာဆိုင်းပြီး ဖမ်းဆီးမှုတွေ၊ အိမ်ရာဖျက်ဆီးမှုတွေ စတဲ့ ပြစ်မှုတွေကို ဤအဖွဲ့ကြီးက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချပါတယ်။
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာရှိကြတဲ့ အစ္စလာမ့်ခေါင်းဆောင်တွေ၊ မွတ်စ်လင်မ် ပြည်သူတွေအနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ ပထမအဓိက ပြဿနာ၊ ဗိုင်သွလ်မုက္ကဒတ်စ်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တာဝန်သိကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပြီး အားလုံးညီညွတ်ကြဖို့လည်း နှိုးဆော်ပါတယ်။
မတရား အနိုင်ကျင့်ခြင်းဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တိုးတက်သာယာမှုကို ပျက်စီးစေပါတယ်လို့ အလေးအနက် ပြောကြားပါတယ်။
မွတ်စ်လင်မ်ထုဟာ ချည့်နဲ့တာမှန်ပေမဲ့ မသေသေးပါဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
Inews-0066/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » IUMS
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် အသင့်တော်ဆုံးသော ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး (၆) နိုင်ငံတွင် မွတ်စ်လင်မ်နိုင်ငံ (၄) ခု ပါဝင်
24.1.17 Egypt , Malaysia , Mexico , Pakistan , Turkey , Vietnam , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ဖို့အတွက် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး နိုင်ငံများစာရင်းကို ကမ္ဘာ့ကျော် လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်တဲ့ Amy Companion က ထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း (၁၉၀) ကျော်ရှိတဲ့အနက်မှ ၎င်းတို့အဖွဲ့အစည်းများအတွက် အသင့်တော်ဆုံးသော (၆) နိုင်ငံကို ရွေးချယ်ခဲ့ရာမှာတော့ ထူးခြားမှုအဖြစ် မွတ်စ်လင်မ်နိုင်ငံ (၄) ခုတောင် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါအဖွဲ့ကြီးက ထုတ်ပြန်တဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် အသင့်တော်ဆုံးသော ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး (၆) နိုင်ငံကတော့...
ဗီယက်နမ် တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Inews-0065/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » GEO TV
ဟိဂျာဗ်ဝတ် မွတ်စ်လင်မ်သားအမိနှစ်ဦးကို ရဲမေအဖြစ် ပထမဆုံးအကြိမ် ခန့်အပ်ရန် စကော့တလန်ရဲဌာနဆုံးဖြတ်
24.1.17 Scotland , United Kingdom , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
စကော့တလန်သူ မွတ်စ်လင်မ် မိခင်နဲ့ သမီးတို့ကို စကော့တလန်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ပထမဦးဆုံးသော ဟိဂျာဗ် (အစ္စလာမ့်အမျိုးသမီး လုံခြုံမှုအဝတ်အစား) ဝတ်ဆင်တဲ့ အမျိုးသမီးဝန်ထမ်း (ရဲမေ) တွေအဖြစ် တာဝန်ပေး ခန့်အပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သနားကြင်နာမှုနဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတရား ကြီးမြင့်တဲ့ယုယထွေးပိုက်သော ရဲဝန်ထမ်းသစ်များ ဖြည့်တင်းခြင်းအစီအစဉ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် စကော့တလန်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ပထမဦးဆုံးသော ဟိဂျာဗ်ဝတ်စုံဝတ် ရဲမေများအဖြစ် ခန့်အပ်ထားရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းမှာကတည်းက စကော့တလန် ရဲဌာနဟာ လူမျိုးဘာသာမရွေး ရဲမေတွေကို ခန့်အပ်သွားမယ်လို့ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ရဲမှူးချုပ်ကြီးရဲ့ ပြောပြချက်အရ အဆိုပါ ဟိဂျာဗ်ဝတ်ဆင်သော မွတ်စ်လင်မ် ရဲဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးများ ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ အခုလို လာရောက်လျှောက်ထားခြင်းကြောင့် ဝမ်းမြောက်ကြောင်းနဲ့ မိမိတို့ ရဲဌာနရဲ့ လူမျိုးဘာသာအသီးသီးနဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုအပေါ် အကောင်းဆုံးသော ကိုယ်စားပြုမှု ဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Inews-0064/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » GEO TV
ကမ္ဘာ့လူဦးရေထက်ဝက်ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ ညီမျှနေသော ဘီလျှံနာ(၈)ဦးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု
24.1.17 သတင်း , နိုင်ငံတကာ
ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ ဘီလျံနာသန်းကြွယ်သူဌေး (၈) ဦးဟာ ကမ္ဘာ့လူထုထက်ဝက်ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ ထပ်တူနီးပါးလောက် ပိုင်ဆိုင်ထားကြတယ်လို့ နိုင်ငံတကာ OXFAM အဖွဲ့ကြီးရဲ့ စစ်တမ်းက ဖော်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့လူဦးရေထက်ဝက်ဖြစ်တဲ့ ဆင်းရဲသားလူတန်းစားတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ အလွန်ကိုချမ်းသာကြွယ်ဝနေတဲ့ လူတချို့ရဲ့ကြားက ပိုင်ဆိုင်မှုဟာ သိပ်ကိုကွာဟလာနေပါတယ်။
ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူ (၁၀) ဦးလျှင် တစ်ဦးဟာ နှစ်ဒေါ်လာထက်နည်းတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ အသက်ရှင်နေရတဲ့အချိန်မျိုးမှာ လူရှစ်ဦးတည်းက ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ထက်ဝက်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကို ပိုင်ဆိုင်ရယူထားတယ်ဆိုတာ တော်တော်ကြီးကို ကွာဟလွန်းနေပါတယ်။
ဒီ့အရင်က တရုတ်ပြည်နဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့စစ်တမ်းတွေမှာ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဟာ လူတွေကြားမှာ အလွန့်အလွန် ကွာဟလာနေတယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြထားတာရှိခဲ့ပြီး အခုအခါမှာတော့ အဆိုပါစစ်တမ်းတွေကို OXFAM အဖွဲ့ကြီးက အတည်ပြုလိုက်သလိုပါပဲ။
OXFAM အဖွဲ့ကြီးရဲ့စစ်တမ်းအရဆိုရင် လက်ရှိ ကမ္ဘာ့ဆင်းရဲသား လူဦးရေထက်ဝက်ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုဟာ အရင်က ထက်ဝက်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုထက်ကို ပိုနည်းပါးလာနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါဟာဆိုရင် အလွန်ဆိုးရွားတဲ့ ကွာဟမှုကြီးလို့လည်း OXFAM အဖွဲ့ကြီးက ညွှန်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
OXFAM အဖွဲ့ဟာ ဆွစ်ဇလန်နိုင်ငံ Davos ဒေသမှာရှိတဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာမှာ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ ဒီပြဿနာကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပေးဖို့ ၎င်းတို့က တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် ဒီလိုလူတန်းစားအလွှာတွေကြား ကွာဟမှုဟာ ဆက်တိုက်ဖြစ်လာနိုင်ပြီး နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး အစရှိတဲ့နယ်ပယ်တွေမှာ တည်ငြိမ်မှုမရှိဘဲ ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်း သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းရမဲ့နည်းလမ်းကတော့ ဝင်ငွေနဲ့ချမ်းသားမှုအပေါ် အခွန်တိုးကောင်းခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ လူတန်းစားအလွှာ ကွာဟမှုကို လျော့နည်းစေနိုင်ပြီး လူထုကိုလည်း အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပါလိမ့်မယ်။ လုပ်ငန်းတွေကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးမှုတို့ဟာလည်း ဒီလိုကွာဟမှု ကြီးမားနေတဲ့ ပြဿနာကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
ထို့အတူ စီးပွားရေးစနစ်သစ်တစ်ခုကိုလည်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပြီး၊ အခွန်ပေးခြင်းကို ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ သူကြွယ်တွေကို မမျှတသောပုံစံ ဘက်လိုက်မှုသဘောဆောင်တဲ့ ထောက်ပံ့နေတဲ့ အရင်းရှင်ဝါဒကိုလည်း ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ OXFAM အဖွဲ့ကြီးက ဆိုပါတယ်။
“ ဒီလိုလူတန်းစားအလွှာတွေရဲ့ကြားက ကွာဟမှုကြီးမားနေခြင်းဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ဒီမိုကရေစီကိုပါ ခြိမ်းခြောက်နေတယ် ” လို့ OXFAM အဖွဲ့ရဲ့ မန်နေဂျာ စီနီဗယာနီမှာက ဆိုပါတယ်။
“ လူအများစုကို အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ့်ပုံစံနဲ့ အရင်းရှင်ဝါဒကို ကျင့်သုံးရမဲ့ နည်းလမ်းကွဲများလည်းရှိပါသေးတယ် ” လို့လည်း OXFAM အဖွဲ့ကြီးရဲ့ နိုင်ငံရေးဌာနခွဲ ဌာနမှူး မာကစ်လောင်စူးန်ကလည်း ပြောပါတယ်။
OXFAM အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်တဲ့ ကမ္ဘာ့လူသားထက်ဝက်စာပိုင်ဆိုင်သော ကုဋေကြွယ်သူဌေးသား (၈) ဦးရဲ့ အမည်စာရင်းကတော့...
မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကို တည်ထောင်သူ ဘီလ်ဂိတ်
ဖေ့စ်ဘွက်ကို တည်ထောင်သူ မာက်ဇူကာဘာ
နယူးယောက်မြို့တော်ဝန်ဟောင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် မိုက်ကယ်ဘလူးမ်ဘဂ်
မက်ဆီကိုနိုင်ငံသား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ကာလော့စ်စလ်ယမ်
အော်ရီကယ်ကုမ္ပဏီရဲ့ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် လောရီ အီလိုင်စူန်
အမာနီရှုအုရ်သဗ်ဂါ တို့ ဖြစ်တယ်။
ဒီပုဂ္ဂိုလ်(၈)ဦးရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုဟာ ဒေါ်လာ (၄၂၆) ဘီလီယံလောက်ရှိပြီး သူတို့ထဲမှာ အချမ်းသာဆုံးကတော့ ဘီလ်ဂိတ် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ပိုင်ဆိုင်မှု တစ်ခုတည်းကတင် ဒေါ်လာ (၇၅) ဘီလီယံလောက်အထိ ရှိပါတယ်။
Inews-0063/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » قناة الجزيرة
ကိုယ်ခန္ဓာအောက်ပိုင်းမရှိတဲ့ ကလေးငယ် အွမ်ရဟ်သွားရောက်ပြုလုပ်
24.1.17 Qatar , Saudi Arabia , Video , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
မွေးကတည်းက ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ အောက်တစ်ပိုင်း မပါရှိတဲ့ ကာတာနိုင်ငံသား ကမ္ဘာကျော်အာဂလူသားလေး ဂါနင်မ်မိဖ်သာဟ်ဟာ သောကြာနေ့က မက္ကဟ်မြို့တော်ကြီးဆီကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးနောက် အွမ်ရဟ် ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အွမ်ရဟ်ဝတ်ပြုမှုအတွင်းပြုလုပ်တဲ့ သူ့ရဲ့သဝါးဖ်ဟာ တခြားသော ကျန်းမာရေးကောင်းသူတွေ လမ်းလျှောက်ပြီး သဝါးဖ်လုပ်ကြသလို၊ လမ်းမလျှောက်နိုင်သူတွေ တစ်ဦးတစ်ယောက်အကူအညီနဲ့ ဘီးတပ်ကုလားထိုင်မှာထိုင်ပြီး သဝါးဖ်လုပ်ကြသလိုမျိုးတော့ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။
သူဟာ မွေးရာပါ ကိုယ်အင်္ဂါမစုံလင်တာကို အံတုပြီး တကယ့်အာဂစိတ်ဓာတ်နဲ့ ကြံ့ကြံ့ခံရင်း ကအ်ဗာကျောင်းတော်ကြီးကို လက်နဲ့လမ်းလျှောက်ပြီး ထူးထူးခြားခြား သွဝါးဖ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
သူရဲ့ Instagram အကောင့်မှာလည်း ကအ်ဗဟ်ကျောင်းတော်ကို သွဝါးဖ်လုပ်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို တင်ပြခဲ့လို့ အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဂါနင်မ်လေးဟာ သူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကို အားပြုပြီး ကအ်ဗာကျောင်းတော်ကြီးကို သွဝါးဖ်အကြိမ်ပေါင်း (၇) ကြိမ်တိုင် ကြိုးစားပြီး လှည့်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။
သောကြာနေ့ မဂ်ရိဗ်စွလာသ်အပြီး ကအ်ဗဟ်ကျောင်းတော်မှာ သွဝါးဖ်လုပ်နေသူတွေဟာ သူ့ရဲ့ဂရုဏာသက်ဖွယ်မြင်ကွင်းကို တွေ့မြင်ခဲ့ကြရပါတယ်။
ဂါနင်မ်လေးဟာ လက်နှစ်ဖက်နဲ့လမ်းလျှောက်ပြီး ကအ်ဗဟ်ကျောင်းတော်ကြီးကို သွဝါးဖ်လုပ် ဖူးမျှော်ချင်ခဲ့တဲ့ သူ့ဘဝရဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုကို မက္ကဟ်မြို့တော်ဝန်ကြီး စွလ်သွာန်းဗင်န်စလ်မာန်းက လက်တွေ့မှာ လွယ်ကူစွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်အောင် ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဂါနင်မ်နဲ့ သူ့မိသားစုဝင်တွေအတွက် လူသူထူထပ်လှတဲ့ ကအ်ဗာကျောင်းတော်ကြီးပရဝုဏ်အတွင်း အလွယ်တကူ သွဝါးဖ်လုပ်နိုင်ဖို့ မက္ကဟ်မြို့တော်ဝန်ကြီး စွလ်သွာန်းဗင်န်စလ်မာန်းက လုံခြုံရေးတာဝန်ယူပေးခဲ့ပါတယ်။
မြို့တော်ဝန်ကြီးက လုံခြုံရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို သီးသန့်စီစဉ်ပေးခဲ့တာကြောင့် ဂါနင်မ်နဲ့ သူ့မိသားစုကို မက္ကဟ်မြို့တော်ကြီးဆီ ရောက်ရှိလာတာနဲ့ ကြိုဆိုပြီး အွမ်ရဟ်ပြီးတဲ့အထိ လိုအပ်သမျှကို ၎င်းတို့က ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သန့်စင်တဲ့ ကျောက်နက်တော်ကြီးကိုလည်း နမ်းရှုံ့ချင်ခဲ့သူ ဂါနင်မ်ရဲ့အိပ်မက်ကိုလည်း အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့မိသားစုဝင်တစ်ဦးက ချီမပြီး ကျောက်နက်တော်ကြီးကို အားပါးတရ နမ်းရှုံ့စေခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီနေ့က ကအ်ဗာကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ ရှေ့ဆောင်အိမာမ် အလှည့်ကျ တာဝန်ကျသူ မာဟိရ်မုအိုင်ကိလီကလည်း ဂါနင်မ်လေးကို ကအ်ဗဟ်ကျောင်းတော်ကြီးအနီးအပါးမှာပဲ ကြိုတင်ရောက်ရှိ၍ တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ပြီး ဖက်လဲတကင်းနဲ့ အားပေးစကား ပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။
Inews-0062/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » العربية
[info title="ကြည့်ရှုမှု အဆင်မပြေပါက" icon="exclamation-circle"] အလင်းမျက်ဝန်း You Tube Channel တွင်လည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ » https://youtu.be/cwXo5-FtACo
ဗိုလ်ရန်ပြေဗလီ၏ အစ္စလာမ့်အခြေခံကျောင်း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ် နှစ်ပတ်လည် ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပြီးစီး
23.1.17 ပြည်တွင်း , သတင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒလမြို့နယ်၊ ဗိုလ်ရန်ပြေရပ်ကွက်၊ ရဟ်မသ်ဗလီရှိ “ဗရကသွလ်အုလူးမ်” အစ္စလာမ့်အခြေခံပညာရေးစာသင်ကျောင်း၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ် နှစ်ပတ်လည်ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကို ယမန်နေ့ (၂၂-၁-၂၀၁၇) တနင်္ဂနွေနေ့နံနက်က ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
အခမ်းအနားကို သဘာပတိအဖြစ် မောင်ဝ်လာနာ မိုဟမ္မဒ်ကရီမွလ္လာဟ်ဟစန်စုလိုင်မာနီက ကြီးမှူးပြီး ဟာဖွိဇ်မော်လဝီမွတ်စ်သွဖွာ(ဘိုကလေး) နဲ့ ကာရီဟာဖီးဇ်ခိုင်ရွလ္လာဟ်တို့က ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကို အသီးသီး ဖတ်ရွတ်ပြီး အခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ထို့နောက်မှာတော့ ဗလီအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဦးခင်မောင်က ကျောင်းနှင့်ပတ်သက်သည်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး ကြွရောက်လာတဲ့ ဧည့်သည်တော်များကို ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ ကျောင်းသားလေးများရဲ့ စွမ်းရည်များကို ဖော်ထုတ်ပြသတဲ့အစီအစဉ်များ အသီးသီးတင်ဆက်ပြသခဲ့ကြပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့ ထူးခြားတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ရပ်အဖြစ် ကာရီ ဟာဖီးဇ် မိုဟမ္မဒ် အိစ်မာအီလ်ဆိုတဲ့ မျက်မမြင် ဟာဖီးဇ်ပညာရှင်လေးဟာ ၎င်းရဲ့သာယာတဲ့အသံနဲ့ ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကို ဖတ်ရွတ်ပြပြီးနောက် တမန်တော်မြတ် ﷺ ကို ချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုတဲ့ကဗျာလင်္ကာကို ရွတ်ဆိုပြခဲ့တာကြောင့် ကြွရောက်လာတဲ့ ပရိသတ်များက အထူးနှစ်ခြိုက်စွာနဲ့ ချီးကျူးသြဘာပေးခဲ့ကြပါတယ်။
ပြီးနောက်မှာတော့ ပညာရည်ထူးချွန် ကျောင်းသားများကို ဂုဏ်ပြုဆုများနဲ့တကွ ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်များ ချီးမြှင့်ပေးအပ်ပါတယ်။
ပြီးနောက်မှာတော့ ကာရီ ဟာဖီးဇ် မိုဟမ္မဒ် အိဗ်ရာဟီးမ်က ဆုတောင်းဒုအာပြုပြီး အခမ်းအနားကို နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။
အစီအစဉ်ပြီးဆုံးပြီးနောက်မှာတော့ အခမ်းအနားကို ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဧည့်ပရိသတ်များကို နေ့လယ်စာဖြင့် ထမင်းကျွေးဧည့်ခံခြင်းအပြင် အမှတ်တရ သာသနာ့အခြေခံစာအုပ်များကိုလည်း အခမဲ့ဝေငှပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Mnews-003/17 © အလင်းမျက်ဝန်း
အင်္ဂလန်တွင် ချိပ်ပိတ်ခံထားရသော ဗလီအတွင်းမှ နမားဇ်ချိန်တွင် အဇာန်သံထွက်ပေါ်
22.1.17 Video , သုတအထွေထွေ
[warning title="သတိပြုပါရန်" icon="exclamation-triangle"] ဤအကြောင်းအရာတွင် အသုံးပြုထားသော Video ဖိုင်မှာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်က သတင်းမီဒီယာအချို့မှ တင်ပြခဲ့သော ဆွီဒင်နိုင်ငံမှ ဗလီဖွင့်ပွဲ ရုပ်သံဖိုင်တစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ဖော်ပြသည့်အကြောင်းအရာနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း သိစေအပ်ပါသည်။ [/warning]
အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် အစိုးရမှ ချိပ်ပိတ်ထားသော လူမရှိသည့်ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ကြီးတွင် နမားဇ်ဝတ်ပြုချိန်ရောက်သည့်အခါ အဇာန်ဆိုသံအား ကြားနေရသည့်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်မှ သတိပြုမိပြီးနောက် တစ်နိုင်ငံလုံး ဟိုးလေးတစ်ကျော်ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။
ယင်းကိစ္စအား သက်ဆိုင်ရာအစိုးရမှ အကြိမ်ကြိမ် စုံစမ်းရှာဖွေစစ်ဆေးမှုများကို ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း အဇာန်ဆိုသူအား အရိပ်အယောင်ပင် မတွေ့ခဲ့ရဘဲ လက်လျှော့ခဲ့ရပေသည်။
ယခုကဲ့သို့ အစောပိုင်းကာလတွင် မကြာခဏဖြစ်ပွားပြီးလေ့ရှိသည့်အပေါ် သတင်းမီဒီယာသမားများနှင့်တကွ အလွတ်တန်း စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများကလည်း စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ပေမယ့် ထူးခြားမှုတစ်စုံတစ်ရာ မတွေ့ရှိခဲ့ရပေ။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကြားနေကျ အဇာန်သံမှာ အလိုလိုငြိမ်သက်ပြီး ကွယ်ပျောက်သွားလေတော့သည်။
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကြီးမားနက်ရှိုင်းလှသော မဟာမုအ်ဂျိဇဟ် တန်ခိုးတော်တစ်ရပ်အဖြစ် ပြသလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
GKM-003/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » ayatinfos.com
[info title="ကြည့်ရှုမှု အဆင်မပြေပါက" icon="exclamation-circle"] အလင်းမျက်ဝန်း You Tube Channel တွင်လည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ » https://youtu.be/5mC0cOKZhxA
ကမ္ဘာအရှည်ဆုံး လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ လက်ချိတ်တွဲမှုကြီးကို အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်
22.1.17 India , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
အိန္ဒိယအစိုးရလက်အောက်ခံ ဘေဟာရ်ပြည်နယ်မှာ အရက်သေစာသောက်စားခြင်းကို ဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ ကမ္ဘာ့အရှည်လျားဆုံး လက်ချိတ်တွဲကြီး ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အိန္ဒိယမီဒီယာတွေရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ တစ်သောင်းတစ်ထောင်နှစ်ရာကိုးဆယ့်နှစ် (၁၁၂၉၂) ကီလိုမီတာ (မိုင် ၇၀၀၀ ကျော်) လောက်ရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့အရှည်လျားဆုံး လူသားချင်းစာနာတဲ့ လက်ချိတ်တွဲမှုကြီး ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အဆိုပါ လက်ချိတ်တွဲပွဲတော်ကြီးဟာ ဘေဟာရ်ပြည်နယ်ကြီးရှိ (၃၈) မြို့နယ်အားလုံးမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရရဲ့ အဆင့်မြင့်ဝန်ကြီးများ၊ နိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝိုင်းမှပုဂ္ဂိုလ်များအပါအဝင် လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ အသိုင်းအဝိုင်းပေါင်းစုံမှ လူပေါင်း သိန်းနှစ်ဆယ်တို့ဟာ ဒီလက်ချိတ်တွဲမှုကြီးကို ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ပြည်သူလူထုအတွင်း အရက်သေစာ သောက်စားခြင်းကို ဆန့်ကျင်တဲ့ အာရုံကို နိုးကြားတက်ကြွစေဖို့အတွက် ဒေသစံတော်ချိန် နေ့လည်ခင်း (၁၂း၃၀) နာရီမှ တစ်နာရီအထိ နာရီဝက်ကြာအောင် ဒီလက်ချိတ်တွဲမှုကြီးကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဂြိုလ်တုကင်မရာများ၊ မောင်းသူမဲ့စက်ရုပ်ဒရုန်းယာဉ်ကင်မတာများဖြင့် အဆိုပါလူသားချင်းစာနာတဲ့ ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး လက်ချိတ်တွဲမှုကြီးကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ကြသလို ရဟတ်ယာဉ်များနဲ့လည်း တာဝန်ရှိသူများက မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများကို တပြိုင်တည်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
Inews-0061/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » GEO TV
ကမ္ဘာကျော် ဟောင်ကောင် ကွန်ဖူးမင်းသား ဂျက်ကီချန်းက ဘောလီဝုဒ်မင်းသား စလ်မာန်းခါန်းကို ပေးပို့တဲ့ ရုပ်သံသဝဏ်လွှာကြောင့် လူအများစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်
21.1.17 India , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
ဟောလီဝုဒ်မှ ကမ္ဘာကျော် ဟောင်ကောင်ကွန်ဖူးမင်းသားကြီး ဂျက်ကီချန်းဟာ ကမ္ဘာကျော် ဘောလီဝုဒ်မင်းသား စလ်မာန်းခါးန်ကို ဂုဏ်ပြုဝမ်းမြောက်ကြောင်း စကားသဝဏ်လွှာပါးလိုက်တဲ့ ဗွီဒီယိုကြောင့် ပရိသတ်တွေအားလုံးကို အံ့အားသင့်စေခဲ့ပါတယ်။
အိန္ဒိယမီဒီယာတွေရဲ့အဆိုအရ ဘောလီဝုဒ်မင်းသား စိုနူးစူးဒ်ဟာ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ဗွီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကို တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီဗွီဒီယိုထဲမှာတော့ မင်းသားကြီး ဂျက်ကီချန်းဟာ အိန္ဒိယရိုးရာဝတ်စုံကို အကျအနဝတ်ဆင်ထားပြီး ဟင်ဒီဘာသာနဲ့ မင်းသားကြီး စလ်မာန်းခါန်းကို နှုတ်ဆက်စကား ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ “ ကျနော် မကြာခင် ခင်ဗျားရှိတဲ့အိန္ဒိယကိုလာပြီး ခင်ဗျားနဲ့လာတွေ့ပါမယ်။ အခု မိတ်ဆွေကြီး စိုနူးစူးဒ်နဲ့အတူ အိန္ဒိယကို ကျုပ်လိုက်လာပါပြီ။ ” လို့ ဟင်ဒီစကားကို လေသံခပ်ဝဲဝဲလေးနဲ့ ပြောကြားထားတာ မြင်တွေ့ရပါတယ်။
မင်းသားကြီး ဂျက်ကီချန်းဟာ မကြာသေးခင်ကပဲ ရိုက်ကူးပြီးစီးခဲ့တဲ့ Kung Fu Yoga ဇာတ်ကားကြီးရဲ့ မိတ်ဆက်ကြော်ငြာအတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံကို လာမယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲ့ဒီဇာတ်ကားကြီးမှာ ဟောလီဝုဒ်အက်ရှင်မင်းသား စိုနူးစူးဒ်နဲ့ အာရှကီးမင်းသမီးလို့လူသိများတဲ့ ဒီရှားပတာနီးတို့လည်း အဓိကဇာတ်ကောင်များအဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြပြီး လာမယ့် ဇန်နဝါရီလ (၂၆) ရက်နေ့မှာ ရုံတင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကမ္ဘာကျော် မင်းသားကြီးနှစ်ယောက် တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်မှာရော ဘာတွေဆက်လုပ်ကြမှာလဲဆိုတာကတော့ စောင့်ကြည့်ရမယ့် စိတ်ဝင်စားဖွယ် သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်နေပါတော့တယ်။
Inews-0060/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » GEO TV
ဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ သမ္မတသစ်ကျမ်းကျိန်ပွဲအခမ်းအနားကို ဆော်ဒီဘုရင်မှ သဝဏ်လွှာပေးပို့
21.1.17 Saudi Arabia , United States of America , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားနိုင်ငံရဲ့ ဘုရင်ကြီး စလ်မာန်းဗင်အဗ်ဒွလ်အဇီးဇ်ဟာ သောကြာနေ့ညနေက ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန်သမ္မတသစ် ဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲအခမ်းအနားနဲ့ သမ္မတတာဝန် လွှဲပြောင်းရယူခြင်းအပေါ် ဝမ်းမြောက်ကြောင်း သဝဏ်လွှာ ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။
ဆော်ဒီဘုရင်ကြီးစလ်မာန်းဟာ သူ့အမည်နဲ့အတူ ဆော်ဒီနိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ကိုယ်စား သမ္မတသစ် ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကို ဂုဏ်ပြုကြောင်းနဲ့ ကျန်းမာချမ်းသာစွာနဲ့ သမ္မတတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နိုင်ရန် မျှော်လင့်ကြောင်း၊ အမေရိကန်ပြည်သူတွေအတွက်လည်း တန်ဖိုးရှိတဲ့ သမ္မတဖြစ်ပါစေကြောင်းနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသားများအတွက်လည်း ပိုမိုတိုးတက်အောင်မြင်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ကြောင်းတို့ကို ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်နဲ့ဆော်ဒီ မိတ်ဆွေနှစ်နိုင်ငံကြားက သမိုင်းဝင် ဆက်ဆံရေးဟာ အထူးခိုင်မြဲမှုအပေါ် ဂုဏ်ပြုချီးမွှမ်းကြောင်းနဲ့ ရှေ့ဆက်ပြီး နှစ်နိုင်ငံကောင်းကျိုးကို ဖြစ်ထွန်းစေနိုင်ဖို့အတွက် မဟာဗျူဟာမြောက်သော အမြင်တွေနဲ့အညီ ကဏ္ဍတိုင်းမှာ လက်ရှိထက်ပိုမိုခိုင်မာအောင်၊ ဆထက်ထမ်းပိုး ပိုမိုတိုးတက်လာအောင် လုပ်ဆောင်သွားဖို့ မျှော်လင့်ကြောင်းတို့ကို အလေးအနက် တိုက်တွန်းကြောင်းကို ဘုရင်ကြီးစလ်မာန်းဟာ ဂုဏ်ပြုသဝဏ်လွှာမှာ ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Inews-0059/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » العربية
ဆော်ဒီကို ကာကွယ်ခြင်းသည် မိမိနိုင်ငံကို ကာကွယ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပါကစ္စတန်ထုတ်ဖော်ပြောကြား
21.1.17 Pakistan , Saudi Arabia , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကမားလ် ဂျာဗစ်ရ် ဗာဂ်ျဝါက ပါကစ္စတန်စစ်တပ်အနေနဲ့ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားကို ကာကွယ်တာဟာ မိမိနိုင်ငံကိုကာကွယ်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ခံယူထားကြောင်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ဆော်ဒီသံအမတ်ကြီးနဲ့ ပါကစ္စတန်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကမားလ် ဂျာဗစ်ရ် ဗာဂ်ျဝါတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ် ပါကစ္စတန် ကာချုပ်ကြီးက အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ စစ်ဘက်ရေးရာ အထွေထွေဆက်သွယ်ရေးဌာနခွဲ (ISPR) ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ကို ကိုးကားပြီး သတ်စ်နီးမ်သတင်းမီဒီယာက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ရာဝလ်ပင်ဒီဒေသရှိ ပါကစ္စတန်စစ်ဌာနချုပ်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲအတွင်း ပါကစ္စတန်ကာချုပ်ကြီးနဲ့ ဆော်ဒီသံအမတ်ကြီးတို့ဟာ ကာကွယ်ရေးနဲ့ စစ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာ အပြန်အလှန် ကူညီဖေးမသွားကြမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို နှစ်ဖက်အပြန်အလှန် ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာနဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းခဲ့ကြပါတယ်။
Inews-0058/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » تسنیم
ပါကစ္စတန်က မွတ်စ်လင်မ်ကောင်လေးနဲ့ ဂျပန်မလေးတို့ရဲ့ ဆန်းကျယ်လှတဲ့ အွန်လိုင်းဖူစာ
20.1.17 Japan , Pakistan , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
မွတ်စ်လင်မ်ကောင်လေးကို မြတ်နိုးမှုကြောင့် ပါကစ္စတန်ထိလိုက်သွားတဲ့ ဂျပန်မလေး
ဂျပန်မလေးဟာ သူ့ရဲ့အွန်လိုင်းဖူးစာရှင်ချစ်သူ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသား လူပျိုကောင်လေးနဲ့ လက်ထပ်ထိမ်းမြားဖို့ဆိုပြီး ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအထိ လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဖေ့စ်ဘုခ်ပေါ်မှာ သူငယ်ချင်းအဖြစ်ကနေ ချစ်သူဘဝကို ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးနောက် လက်ထပ်ထိမ်းမြားဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးကွာတဲ့ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ခါန်ပူးရ်အထိကိုလိုက်သွားပြီး အစ္စလာမ့်တရားတော်မြတ်အတိုင်း နိကာဟ်ထိမ်းမြားလိုက်ကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ပါကစ္စတန်ကောင်လေးရဲ့ အိမ်မှာတော့ အခုဆို မင်္ဂလာမဏ္ဍပ်ထိုးပြီး နက်ဖန်မှာကျင်းပတော့မယ့် မင်္ဂလာဆောင်အတွက် ဝိုင်းဝန်းပြင်ဆင်နေကြတာကြောင့် လူစည်ကားနေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ (၉)လလောက် အရင်ကပဲ ဖေ့စ်ဘုခ်ပေါ်မှာ ခါန်ပူးရ်ဒေသရဲ့ ရှမ်စ်အာဗာဒ်ရပ်ကွက်သား အသက်(၃၀)အရွယ် လူပျိုလေး အဟ်မဒ်အန္နဝရ်နဲ့ (၂၉)နှစ်အရွယ် ဂျပန်နိုင်ငံသူလေးတို့ဟာ ရင်းနှီးခင်မင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကောင်မလေးဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာကို နှစ်သက်မှုကြောင့် သူမရဲ့အမည်ကိုတောင် မာရီယာအီဒ်လာန်ဆိုပြီး မှည့်တွင်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူတို့နှစ်ဦးဟာ ချစ်ကြိုက်သွားကြပါတယ်။
မာရီယာနဲ့ အန္နဝရ်တို့ရဲ့ နိုင်ငံခြားအွန်လိုင်းဖူးစာအချစ်ကြောင့်ပဲ ဂျပန်နိုင်ငံကနေ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံထိအောင် လူစုလူဝေးနဲ့ ရောက်ရှိလာစေခဲ့ပါတယ်။
အခုအခါမှာတော့ နိုင်ငံမတူ လူမျိုးခြား ဇနီးမောင်နှံလောင်းရဲ့ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲကျင်းပမယ့် လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲကြီးအတွက် အပြင်အဆင်တွေအားလုံးကို နှစ်ဖက်အသိုင်းအဝန်းတွေ ပူးပေါင်းပြီးတော့ ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ကြည်နူးစွာနဲ့ ဆောင်ရွက်နေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
မာရီယာဟာ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်အင်ဂျင်နီယာ ပညာရှင်အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်နေပြီး အဟ်မဒ်အန္နဝရ်ကတော့ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတစ်ခုမှာ လက်ထောက်ဓာတ်ခွဲခန်းမှုးအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။
အိမ်သူအိမ်သားတွေရဲ့ ပြောပြချက်အရ သူတို့နှစ်ဦးဟာ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးနောက် သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ဂျပန်နိုင်ငံကို သွားရောက်ကြမယ်လို့ သိရပါတယ်။
Inews-0057/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » GEO TV
အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ ဒေါက်တာဇာကိရ်နိုက်အပေါ် ထိုးနှက်မှုတစ်ခု ထပ်မံပြုလုပ်
20.1.17 India , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
အိန္ဒိယအစိုးရဟာ ဒေါက်တာဇာကိရ်နိုက်ကို အိန္ဒိယရူပီးငွေ သန်းပေါင်းတစ်ရာလောက် တရားမဝင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတယ်လို့ စွပ်စွဲ
အိန္ဒိယအစိုးရဟာ အလွန်ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးဒီဗိတ်ပညာရှင်ကြီး ဒေါက်တာဇာကိရ်နိုက်ရဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ကို အနေခက် ကျဉ်းကျပ်ရအောင် ထိုးနှက်မှုတစ်ခုကို ထပ်မံစတင်လိုက်ပါတယ်။
အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းမှာ ရူပီးသန်းပေါင်းတစ်ရာလောက် တရားမဝင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတယ်လို့ ဒေါက်တာ့ကို စွပ်စွဲလိုက်ပါတယ်။
ဗဟိုအမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီ (NIA) ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ဒေါက်တာဇာကိရ်နိုက်ရဲ့ ဘဏ်အကောင့်ပေါင်း (၇၈) ခုလောက်ကို စူးစမ်းရှာဖွေစစ်ဆေးမှုအား စတင်လိုက်ပြီး စစ်ဆေးမှု ပြီးဆုံးတာနဲ့ ဒေါက်တာ့ကို ခေါ်ယူဖို့ အမိန့်ချမှတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါက်တာဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းက တရားမဝင် လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲမှုကိုလည်း ခံထားရပြီး မကြာသေးမီကလည်း ဒေါက်တာ့ရဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ အစ္စလာမ့်ရေးရာသုတေသနဖောင်ဒေးရှင်း (IRF) ကိုလည်း အရေးယူခံခဲ့ရတဲ့အပြင် အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းရဲ့ တရားဝင်ထုတ်ဝေတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေပေါ်မှာလည်း တံဆိပ်တုံးအမျိုးမျိုးကို ရိုက်နှိပ်ခံခဲ့ရပါသေးတယ်။
Inews-0056/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » GEO TV
အိုဘားမား၏ နောက်ဆုံးချမှတ်သော ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ဂွါတာနာမိုထောင်ကြီးမှ မွတ်စ်လင်မ်အချို့ လွတ်မြောက်အုံးမည်
20.1.17 Saudi Arabia , United Arab Emirates , United States of America , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
ဘာရက်အိုဘားမားဟာ သမ္မတသက်တမ်းရဲ့ နောက်ဆုံးသော ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။
ရက်စက်မှုနာမည်ဆိုးနဲ့ကျော်ကြားလှတဲ့ ဂွါတာနာမိုထောင်ထဲက နောက်ထပ် မွတ်စ်လင်မ်ညီနောင် အကျဉ်းသားလေးဦးကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ အမိန့်ထုတ်ပြန် ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။
အိုဘားမားဟာ ဒီကနေ့မှာ အိမ်ဖြုတော်ကနေ အငြိမ်းစားသမ္မတကြီးအဖြစ်နဲ့ ထွက်ခွာသွားတော့မှာဖြစ်ပေမယ့် သူပေးခဲ့တဲ့ “ ဘာရက်အိုဘားမားရဲ့ ဂွာတာနာမိုအကျဉ်းထောင်ကြီးကိုပိတ်ပစ်မယ် ” ဆိုတဲ့ ကတိကိုတော့ အကောင်အထည်မဖော်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရုံးရဲ့ ထုန်ပြန်ချက်အရ အကျဉ်းသားသုံးဦးဖြစ်တဲ့ ရာဝလ်မန်ဂါဇူ၊ ဟာဂျီဝလီမုဟမ္မဒ်နဲ့ မုဟမ္မဒ်အစ္စမာအီလ်ကာစင်မ်တို့ကို အရဗ်ပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံ (UAE) ကို လွဲပြောင်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စတုတ္ထမြောက်အကျဉ်းသား ဂျဗ်ရာန် အလ်ကသ်ွဟာနီကိုတော့ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားနိုင်ငံကို လွဲအပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Inews-0055/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » GEO TV
နေ့စဉ်ဗလီကိုလာပြီး ဖဂျရ်နမားဇ်ဖတ်တဲ့ ကြောင်လေး
19.1.17 Egypt , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
ကြောင်ကလေးတစ်ကောင်ဟာ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်တစ်လုံးမှာ နေ့စဉ်ဖဂ်ျရ်စွလာသ်ဝတ်ပြုတယ်ဆိုတာ အသင်ယုံမလား?
အီဂျစ်နိုင်ငံ မဟလ္လာမြို့က ကြောင်လေးတစ်ကောင်ဟာ လူအများရဲ့ အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ ဒီကြောင်လေးအကြောင်းပဲ ပြောဆိုနေကြရတဲ့အထိကို ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီမြို့ရဲ့ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်မှာ နေ့စဉ်ပုံမှန် စွလာသ်ဝတ်ပြုလေ့ရှိကြသူတွေဟာ ကြောင်လေးတစ်ကောင်ကို သတိပြုမိခဲ့ကြပါတယ်။
ကြောင်လေးဟာ ဖဂျရ်စွလာသ် အချိန်ကျရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဗလီအဝမှာ ရှေ့ဆောင်ဆရာကို ထိုင်စောင့်နေလေ့ရှိပါတယ်။
ရှေ့ဆောင်ဆရာက ကျောင်းတံခါးဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင် ကြောင်လေးဟာ ဗလီအတွင်းထဲ အပြေးဝင်ရောက်လာပြီး ရပ်ကွက်သားတွေနဲ့အတူ ဘေးမှာထိုင်နေလေ့ ရှိခဲ့ပါတယ်။
အစောပိုင်းမှာတော့ ဒါကို စွလာသ်ဝတ်ပြုသူတွေဟာ အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပဲ နေခဲ့ကြပါတယ်။
ရပ်ကွက်သားတွေဟာ ကြောင်လေးကို ဗလီထဲကနေ မောင်းထုတ်ဖို့ အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ကြပေမဲ့ မအောင်မြင်ခဲ့ကြပါဘူး။ ဘယ်လိုမောင်းထုတ်မောင်းထုတ် ဖဂျရ်စွလာသ် အချိန်ရောက်ရင်တော့ ကြောင်လေးဟာ ဗလီမှာ အသင့်ရောက်နေတာကို တွေ့ကြရပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ ရပ်ကွက်သားတွေဟာ ကြောင်လေးကို မောင်းမထုတ်တော့ဘဲ သူတို့နဲ့အတူ စွလာသ်ဝတ်ပြုဖို့ ခွင့်ပေးလိုက်ကြပါတယ်။
အဲ့ဒီဗလီဟာ “ကုဖရ်ဟိဂျာဇီ” ဆိုတဲ့ ရွာမှာ တည်ရှိပါတယ်။ စွလာသ်ဝတ်ပြုသူတွေကြားမှာ ကြောင်လေးဝတ်ပြုဖို့ နေရာတစ်နေရာ ပေးထားကြပါတယ်။
စွလာသ်ဝတ်ပြုသူတွေကို ပိုပြီးအံ့အားသင့်စေတဲ့အချက်ကတော့ ဂျမာအသ် မရပ်မချင်း ကြောင်လေးဟာ နံရံမှာ ရေးသားထားတဲ့ ကုရ်အာန်အာယသ်တော်တွေကိုပဲ စူးစူးစိုက်စိုက် ကြည့်နေလေ့ရှိပါတယ်။ ဂျမာအသ်ရပ်ပြီဆိုတာနဲ့ သူလည်းအများနည်းတူ ထရပ်လိုက်ပါတော့တယ်။
စွလာသ်ဝတ်ပြုပြီးရင် ဗလီကထွက်ခွာသွားပြီး နောက်တစ်နေ့ ဖဂျရ်အချိန်ရောက်မှ သူ့ကိုပြန်တွေ့ကြရပါတယ်။ အခြားအချိန်တွေမှာတော့ သူ့ကို ဗလီမှာ တွေ့ရလေ့ မရှိပါဘူး။
Inews-0054/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » الأيام
မွတ်စ်လင်မ်အမျိုးသမီးငယ်လေးရဲ့ ပုဝါကို ဆွဲချွတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့လူငယ် လက်သီးစာမိခဲ့
18.1.17 Somalia , United States of America , Video , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
မွတ်စ်လင်မ်အမျိုးသမီးငယ်လေးတစ်ဦးရဲ့ မိမိကိုယ်မိမိခုခံကာကွယ်တဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခု လူမှုကွန်ယက်တွေပေါ်မှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်။
ဗွီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာ ပုဝါဆွဲချွတ်သူကို သူမက ရုတ်တရက် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်လိုက်တာကို မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗွီဒီယိုမြင်ကွင်းအရ အဲ့ဒီမွတ်စ်လင်မ်အမျိုးသမီးငယ်လေးဟာ ဆိုမားလီယားနိုင်ငံသူဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
သူမဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ နေထိုင်ပြီး ပညာသင်ယူဆည်းပူးနေသူ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းလို့ယူဆရတဲ့ နေရာတစ်ခုမှာ လူငယ်တစ်ဦးက သူမရဲ့အမြတ်တနိုးဝတ်ဆင်ထားတဲ့ ခေါင်းဆောင်းပုဝါကို အနောက်ကနေ အတင်းဆွဲချွတ်ဖို့ ကြိုးစားလာတာကို တားဆီးဖို့အတွက် ဝါရင့်လက်ဝှေ့သမားတစ်ဦးလို လျှင်မြန်တဲ့ လက်သီးတိုက်ကွက်တွေကို အသုံးချပြီး ဆက်တိုက်ပစ်သွင်းလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ လက်ဝှေ့စွမ်းရည်ကို ကြည့်ရှုမိကြသူတိုင်းဟာ အံ့သြချီးကျူးပြီး သြဘာပေး ထောက်ခံမိကြပါတယ်။
စော်ကားဖို့ကြိုးစားသူဟာ မိန်းမသားတစ်ဦးကို ဒုက္ခပေးရမယ့်အစား သူမရဲ့ လျှင်မြန်တဲ့ လက်သီးချက်တွေကြားမှာ မိမိကိုယ်မိမိ မနည်းကာကွယ်ခဲ့ရရှာပါတယ်။
Inews-0053/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » الأيام
[info title="ကြည့်ရှုမှု အဆင်မပြေပါက" icon="exclamation-circle"] အလင်းမျက်ဝန်း You Tube Channel တွင်လည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ » https://youtu.be/l5IjsJPj0MI
လပေါ်နောက်ဆုံးခြေချခဲ့သော အာကာသယာဉ်မှူး ကွယ်လွန်
18.1.17 United States of America , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
လပေါ်ခြေချခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးအာကာသယဉ်မှူး Euage Cernan ဟာ အသက်(၈၀)အရွယ်မှာ ကွန်လွန်သွားခဲ့ပါပြီ။
၁၉၃၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၄) ရက်နေ့မှာ Euage Cernan ကို ချီကာဂိုမြို့မှာ ဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။ ကပ်တိန် Cernan ဟာ လပေါ်သို့ နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ရောက်ရှိခဲ့သူ သုံးဦးအနက်က တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Cernan ကွယ်လွန်မှုအပေါ် အမေရိကန်အာကာသဌာန (နာဆာ) က အလွန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၆၇ ခုနှစ်က အပိုလို (၁၀) ခရီးစဉ်မှာ Euage Cernan ပါဝင်ခဲ့ပြီး အဲဒီအပိုလို (၁၀) ဟာ လကမ္ဘာရဲ့မျက်နှာပြင်အထက် ပေ (၅၀၀၀၀) ကနေ ပျံသန်းခဲ့ပြီး ဆင်းသက်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။
အဲဒီနောက် (၃) နှစ်အကြာမှာ အပိုလို(၁၇)ခရီးစဉ်နဲ့ လပေါ်ကို နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီ တစ်ကြိမ်မှာတော့ Euage Cernan ဟာ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်နဲ့ သွားခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပြီး လပေါ်မှာ ဆင်းသက်ရုံမက သုံးရက်တိတိ နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ ယနေ့တိုင်လပေါ်ကို မည်သည့်လူသားမှ ထပ်ပြီး သွားရောက်ကြတာ မရှိသေးပါဘူး။
လပေါ်က ပြန်ဆင်းလာတဲ့အခါတုန်းက သူဟာ အခုလို ဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။
“ ငါတို့လာခဲ့တဲ့ ပုံစံအတိုင်းပဲ ပြန်သွားနေရပြီ။ တကယ်လို့ ဘုရားသခင်သာ အလိုတော်ရှိရင် ငါတို့ဟာ လူသားထုတစ်ရပ်လုံးအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ မျှော်လင့်ချက်လင်းရောင်ခြည်တွေ ယူဆောင်ပြီးတော့ ပြန်သွားလိုက်ချင်တယ်။ ”
Cernan ဟာ လပေါ်မသွားခင် ၁၉၆၆ ခုနှစ်နဲ့ ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွေမှာ အာကာသကို နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
သူဟာ ၁၆၇၉ ခုနှစ်မှာ အငြိမ်းစားယူခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ သူ့ဘဝ ဇတ်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရုပ်ရှင်တစ်ကားလည်း ရိုက်ကူးခဲ့သေးတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
Inews-0052/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » GEO TV
အိန္ဒိယမှာ မွတ်စ်လင်မ်မိန်းကလေးတွေကို ဖြားယောင်းလှည့်စားပြီး အဓမ္မဘာသာကူးပြောင်းစေခိုင်းမှု သတင်းကြီး ပေါက်ကြား
18.1.17 India , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ BJP အစိုးရရဲ့ မွတ်စ်လင်မ်တွေအပေါ် မလိုမုန်းတီးအငြိုးထားပြီး အစီအစဉ်တကျ လုပ်ဆောင်တဲ့ အလွန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခု ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။
အသရ်ပရ်ဒေးရ်ှပြည်နယ်မှာ မွတ်စ်လင်မ်မိန်းကလေးတွေကို သွေးဆောင်ဖြားယောင်းလှည့်စားပြီး အဓမ္မဟိန္ဒူလုပ်ခိုင်းတဲ့ လုပ်ရပ်ကြီးရဲ့ သတင်းတွေပေါက်ကြားခဲ့ပါတယ်။
သုံးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာ မွတ်စ်လင်မ်မိန်းကလေးပေါင်း (၃၇၉) ဦးကို သွေးဆောင်ဖြားယောင်းလှည့်စားပြီး ဘာသာကူးပြောင်းခိုင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယသတင်းမီဒီယာတချို့ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ အစိုးရဟာ အသရ်ပရ်ဒေးရ်ှပြည်နယ်ရှိ ခူရှီဒေသမှာ မွတ်စ်လင်မ်မိန်းကလေးတွေကို သွေးဆောင်လှည့်စားပြီး ဟိန္ဒူဘာသာကူးပြောင်းဖို့ အတင်းအဓမ္မ တိုက်တွန်းစေခိုင်းခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ အတင်းအကြပ် ဟိန္ဒူဘာသာကူးပြောင်းစေခိုင်းမှုကိစ္စမှာ BJP ပါတီရဲ့ ပါလီမန်အမတ် Yogi Adytyanath လည်း ပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်။
ရဲမှတ်တမ်းများအရ မွတ်စ်လင်မ်မိန်းကလေးပေါင်း (၂၄၁၄) ဦးအနက်မှ (၃၇၉) ဦးကို ဟိန္ဒူဘာသာကူးပြောင်းစေဖို့ လှည့်ဖြားသိမ်းသွင်းထားကြောင်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်ပဲ Adytyanath ဟာ ၎င်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ “ ဟိန္ဒူ ယူဝါ ဝါဟေနီ အဖွဲ့” ကိုလည်း တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းထားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ ပါလီမန်အမတ်ဟာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ရဲ့ ပါတီညီလာခံမှာ မွတ်စ်လင်မ်ယောက်ျားလေးတွေက ဟိန္ဒူမိန်းကလေးကို လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအား အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လူမျိုးရေးထိန်းသိမ်းမှုအတွက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး အလွန်ကို အန္တရာယ်ကြီးမားတဲ့ ဥပဒေကန့်သတ်ချက်တွေကို ဦးဆောင်ပြဌာန်းခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
ခူရှီနဂရ်ဒေသက ရဲအရာရှိကြီး ကမာရ်ယာဒူးက သူ့ထံကို အသက်ငယ်ရွယ်တဲ့ မွတ်စ်လင်မ် မိန်းကလေးတွေကို လက်ထပ်ထိမ်းမြားဖို့ ခေါ်ဆောင်လာလေ့ရှိပြီး များသောအားဖြင့် ၎င်းမိန်းကလေးများဟာ အသက်အရွယ်ကို ခိုင်ခိုင်လုံလုံ အထောက်အထားမပြနိုင်ကြတာကြောင့် ခေါ်ဆောင်လာသူတွေရဲ့ ပြောပြချက်ကိုပဲ ယုံကြည်ပြီး ထိမ်းမြားပေးရလေ့ရှိတယ်လို့ သတင်းမီဒီယာတွေကို ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
Inews-0051/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » GEO TV
သာသနာ့ပညာရှင်ကြီးတစ်းပါး အာဖရိကတွင် တရားဟောကြားနေစဉ် ကွယ်လွန်
17.1.17 Pakistan , South Africa , ဝမ်းနည်းမှတ်တမ်း , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
သန့်စင်မွန်မြတ်လှသော ကြယ်တစ်ပွင့် ထပ်မံကြွေကျခဲ့လေပြီ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ခသ်မေ့နဗူဝသ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကြီး၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော်ကြီး ဟဇရသ် မောင်ဝ်လာနာ အဗ်ဒွလ်ဟဖီးဇွ် မက္ကီဆပ်ဟာ မောင်ဝ်လာနာ အဗ်ဒွလ်ဟဖီးဇွ် မက္ကီဆပ်ဟာ တောင်အဖရိကနိုင်ငံရဲ့မြို့တော် Pietermaritzburg မှာ ဒေသစံတော်ချိန်အရ နေ့လည်ခင်းပိုင်းအချိန် ကျင်းပနေတဲ့ အခမ်းအနားတစ်ခုရဲ့ ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်သင်ကြားရေးအစီအစဉ်တစ်ခုအတွင်း ရုတ်တရက် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းပြီး ကျန်းမာရေးဖောက်လာမှုကြောင့် ချက်ချင်းဒေသဆေးဝါးကုသမှုဌာနကို ခေါ်ဆောင်သွားရင်း ကွယ်လွန်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ ဆရာသခင်ကြီး ရှိုင်ခွလ်ဟဒီးဆ် ဟဇရသ်မောင်ဝ်လာနာ ဇကရီယာ رحمة الله عليه ရဲ့ ခလီဖဟ် (ကိုယ်စားလှယ်တော်) ဖြစ်ပြီး ပါကစ္စတန်လူထုသာမက အရဗ်လူထုကလည်း ဆရာသခင်ကြီးကို ကြည်ညိုလေးစား ချစ်ခင်ကြပါတယ်။
ကာလအတန်ကြာ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားမှာ သာသနာ့ပညာရပ်များ သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့တဲ့အတွက် ဆော်ဒီနိုင်ငံသားတွေအပြင် ဘုရင့်ရဲ့ တော်ဝင်မျိုးနွယ်ကြီးကပါ ဆရာသခင်ကြီးကို လက်ခံလေးစားကြပါတယ်။
ဆရာသခင်ကြီးရဲ့ မွေးရပ်မြေဟာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ဖိုင်စွလ်အာဗာဒ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ မွေးရပ်မြေမှာလည်း မြောက်မြားစွာသော ကျောင်းသားတွေဟာ သာသနာ့ပညာရော၊ လောကီပညာရပ်တွေပါ သင်ယူလေ့လာနိုင်တဲ့ သာသနာ့ကျောင်းကြီးတစ်ကျောင်းကို တည်ထောင်ထားပါတယ်။
ဆရာကြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့အပေါ် အရဗ်ကမ္ဘာကပညာရှင်ကြီးတွေရော အိန္ဒိယပါကစ္စတန်ဒေသက ပညာရှင်ကြီးတွေကပါ ကျန်ရစ်သူမိသားစုနဲ့တကွ ထပ်တူထပ်မျှ ဝမ်းနည်းပူဆွေးကြကြောင်း နှစ်သိမ့်စကားများ ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ကြယ်ပွင့်များတောက်ပဝေဆာနေတဲ့ ကောင်းကင်ကြီးပေါ်မှ ကြယ်ပွင့်များ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လျော့ပါးလာခြင်းကြောင့် အလင်းရောင်တွေ ကွယ်ပျောက်ပြီး အမှောင်ထုဖုံးလွှမ်းသွားမှာ စိုးရိမ်ရပါတယ်။
Inews-0050/17 © အလင်းမျက်ဝန်း
ဆရာဝန်များ လက်ရေး ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးသားရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတရားရုံးက အမိန့်ထုတ်ပြန်
17.1.17 Bangladesh , ကျန်းမာရေး , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးက ဆရာဝန်အားလုံးလိုလိုဟာ လက်ရေးမကောင်းတာ အားလုံးအသိပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အခု ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတရားစီရင်ရေးက ဒီအခက်အခဲကို ဖြေရှင်းဖို့ စိန်ခေါ်လိုက်ပါပြီ။
ဆရာဝန်တွေ ရေးသားပေးတဲ့ ဆေးစာတွေဟာ လုံးဝဖတ်မရတဲ့အတွက် ရောဂါသည်တွေဟာ ဆေးအမှားမှား အယွင်းယွင်း အသုံးပြုမှုတွေ မကြာခဏဆိုသလို ပေါ်ပေါက်နေတဲ့အတွက် အခုလို အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ ဆေးအညွှန်းစာတွေကို ကွန်ပျူတာရိုက်ရင်ရိုက်၊ မရိုက်ရင် စကားလုံးကြီးကြီးနဲ့ ရှင်းရှင်းရေးပေးရပါမယ်လို့ အဲဒီအမိန့်စာမှာ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ဒီအမိန့်ပြဌာန်းချက်ကို နိုင်ငံ့တာဝန်အတွင်းရှိနေကြတဲ့ ဆရာဝန်တွေအားလုံးကို အသိပေးဖို့ တရားရုံးက ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကို ညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ နောက်ပြီး လာမယ့် ရက်သတ္တပတ် (၆) ပတ်အတွင်း အခြေအနေတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစီရင်ခံရမယ်လို့လဲ ညွှန်ကြားထားပါတယ်။
ဆရာဝန်တွေဟာ ဆေးစာအညွှန်းရေးပေးတဲ့နေရာမှာ ဆေးလောကသုံး အမှတ်အသားတွေ အသုံးမပြုဘဲ ဆေးဝါးတွေရဲ့ အမည်နာမနဲ့ သူ့ရဲ့ အဓိက ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို ရေးပေးရမယ်လို့ တရားရုံးက ဆရာဝန်တွေကို တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
အများပြည်သူကောင်းကျိုးအတွက် ဒီတိုင်ကြားချက်ကို တရားရုံးမှာ တင်သွင်းခဲ့သူ ရှေ့နေ မွန်ဇိလ်မုရ်ရှိဒ်က အခုလို ရှင်းပြပါတယ်။
“ ရောဂါသည် တော်တော်များများမပြောနဲ့၊ ဆေးဆိုင်တွေတောင် ဆရာဝန်တွေရေးပေးတဲ့ ဆေးစာတွေကို ဖတ်ဖို့ ခက်ခဲ့လှပါတယ်။ ”
“ ဒါကြောင့်ပဲ မကြာခဏဆိုသလို ရောဂါသည်တွေဟာ မှားယွင်းပြီး သူတို့နဲ့ မသင့်တော်တဲ့ဆေးဝါးတွေ မှီဝဲသုံးစွဲမိသွားကြတယ်။ အဲဒီအခါ ငွေကြေးလည်းကုန်တဲ့အပြင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုလည်း ခံစားကြရပါတယ်။ ”
လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာတော့ ဒီအဆိုပြုချက်ကို ထောက်ခံအားပေးသူတွေ တဟုန်တိုး မြင့်တက်လာပြီး တချို့ဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင်က အစိုးရအနေနဲ့ အခတ်အခဲကို စနစ်တကျဖြေရှင်းပေးပြီး သူတို့ကို ကူညီပေးဖို့ပါ တောင်းဆိုကြတာ တွေ့ရပါတယ်။
Inews-0049/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » الأيام
တေးဂီတဟာ စာရိတ္တပျက်ပြားစေမှုအကြောင်းခံနှင့် ပျက်စီးမှုအကြောင်းခံတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ဆော်ဒီဓမ္မသတ်မှူးချုပ်ကြီးမိန့်ကြား
17.1.17 Saudi Arabia , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားနိုင်ငံရဲ့ တော်ဝင်ဓမ္မသတ်မှူးချုပ်ကြီး အဗ်ဒွလ်အဇီးဇ် အရ်ှရှိုင်းခ်က ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယိုနဲ့ တေးဂီတဆိုင်ရာ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေဟာ စာရိတ္တပျက်ပြားစေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ သတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ဒါတွေဟာ လူ့ယဉ်ကျေးမှုတွေ၊ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အမြတ်တနိုးတန်ဖိုးထားမှုတွေ၊ ဂုဏ်ပေးလေးစားမှုတွေကို ပျက်စီးစေဖို့အကြောင်းရင်းတွေလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လို့ ဆက်လက်မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ပြည်ပသတင်းမီဒီယာတစ်ခုရဲ့ ပြောပြချက်အရ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားနိုင်ငံရဲ့ ဓမ္မသတ်မှူးချုပ် အဗ်ဒွလ်အဇီးဇ် အရ်ှရှိုင်းခ်ဟာ ရုပ်ရှင်ရုံတွေနဲ့ တေးဂီတပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေကို ကိုယ်ကျင့်သီလ၊ ကိုယ်ကျင့်စာရိတ္တ ပျက်ပြားစေမှုရဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်ရင်း ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားနိုင်ငံမှာ အဆိုပါ ကိစ္စရပ်တွေကို ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ မှာကြားထားပါတယ်။
ဆော်ဒီမုဖ်သီ ဓမ္မသတ်မှူးချုပ်ကြီးက ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားနိုင်ငံမှာ တကယ်လို့ ရုပ်ရှင်ရုံတွေနဲ့ တေးဂီတဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွေကို နေရာအနှံ့သာ ခွင့်ပြုလိုက်မယ်ဆိုရင် ဒါဟာ စာရိတ္တပျက်ပြားဖို့ အကြောင်းရင်းတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရာ ရှိနေပါတယ်လို့ သတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Inews-0048/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » GEO TV
တူရ်ကီမှာ ဒေါ်လာ(၁)သန်းဖိုး အိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်ရုံနဲ့ တူရ်ကီနိုင်ငံသား ဖြစ်နိုင်ပြီ
16.1.17 Turkey , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
အတည်ပြုပြဌာန်းလိုက်တဲ့ ဥပဒေသစ်အရ တူရ်ကီနိုင်ငံအတွင်းမှာ လာရောက်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဟာ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကို အလွယ်တကူနဲ့ ရနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တူရ်ကီနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကို ဆွဲဆောင်ဖို့အတွက် ပြောင်းလဲအတည်ပြုခဲ့တဲ့ ဥပဒေကို ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့က အတည်ပြု ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရက တရားဝင်အတည်ပြုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ စည်းမျဉ်းတွေအရ တူရ်ကီနိုင်ငံအတွင်းမှာ အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ(၂)သန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ တူရ်ကီနိုင်ငံအတွင်းမှာ အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ (၁)သန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ အိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေဟာ တူရ်ကီနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် လျှောက်ထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆိုပါ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အိမ်ခြံမြေတွေကိုတော့ (၃)နှစ်အတွင်းမှာ ပြန်လည်ရောင်းချလွှဲပြောင်းခွင့် မရှိပါဘူး။
စည်းမျဉ်းတွေအရ တူရ်ကီနိုင်ငံရဲ့ မည်သည့်ဘဏ်မှာမဆို ဒေါ်လာ (၃) သန်း အပ်နှံထားပြီး (၃) နှစ်အတွင်း ပြန်လည်မထုတ်ယူသူတွေဟာလည်း နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
အစိုးရနဲ့ ဒေါ်လာ(၃)သန်းအထက် ငွေကြေးစာချုပ် ချုပ်ဆိုထားသူတွေလည်း အဆိုပါစည်းမျဉ်းသစ်နဲ့ ကိုက်ညီမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တူရ်ကီနိုင်ငံသား (၁၀၀) ကို အလုပ်ခန့်အပ်ထားနိုင်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေဟာလည်း တူရ်ကီနိုင်ငံသားအဖြစ် လျှောက်ထားခွင့်ရှိတယ်လို့ အစိုးရရဲ့ ပြန်တမ်းတွေအရ သိရပါတယ်။
နူးရ်ခါန်း @ အလင်းမျက်ဝန်း (© Inews-0047/17) | ကိုးကား » aa.com
အစ္စရေး ပါလက်စ်တိုင်း နှစ်နိုင်ငံ ပြေလည်ရေး ဒေါနယ်ထရမ့်ကြောင့် ပျက်ပြားဖွယ်ရှိနေတယ်လို့ ပြင်သမ္မတသတိပေး
16.1.17 France , Israel , Palestine , United States of America , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
ပါလက်စ်တိုင်း-အစ္စရေး နှစ်နိုင်ငံပြဿနာ ဖြေရှင်းဖို့ နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက နိုင်ငံကတာအသိုင်းအဝိုင်းဟာ ညီညွတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အခုတော့ အဲဒီကြိုးပမ်းမှုတွေအတွက် အနှောင့်အယှက်တွေ မြင်နေရတယ်လို့ ပြင်သစ်သမ္မတက ဆိုလိုက်ပါတယ်။
ပဲရစ်မြို့မှာ ကျင်းပလျက်ရှိတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံမှာ ပြင်သစ်သမ္မတဖရန်ဆိုအိုလန်းက မိန့်ခွန်းပြောကြားရင်း ကုဒ်စ် (ဗိုင်သွလ်မုက္ကဒ်တ်စ်) မြို့ကို အမေရိကန်သံရုံး ရွှေ့ပြောင်းလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်မှုတွေကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ ထရမ့်ကို သတိပေးပြောကြား လိုက်ပါတယ်။
အစ္စရေး ပါလတ်စ်တိုင်း နှစ်နိုင်ငံရဲ့ ပြဿနာကို ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းခြင်းကသာ ရှေ့တိုးနိုင်မယ့် တစ်ခုတည်းသော လမ်းစဖြစ်တယ်လို့ သူက ဆိုလိုက်ပါတယ်။
အမေရိကန်သံရုံးကို တဲလ်အဗစ်မြို့ကနေ ဗိုင်သွလ်မုက္ကဒ်တ်စ်မြို့သို့ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကို ထိခိုက်သွားစေလိမ့်မယ်လို့ သူက သတိပေးစကားဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဒေါနယ်ထရမ့် ကျမ်းမကျိန်ဆိုမီ ( ၅ ) ရက်အလိုမှာ နိုင်ငံပေါင်း ( ၇၀ ) က ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ ပဲရစ်မြို့မှာ ညီလာခံတစ်ရပ်ကျင်းပခဲ့ကြပြီး ဒီညီလာခံမှာ ပြောကြားမယ့် အချက်အလက်တွေဟာ သမ္မတသစ်ဒေါ်နယ်ထရမ့်အတွက် ပြင်းထန်တဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ တွက်ဆထားကြပါတယ်။
ဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာ အမေရိကန်သံရုံးကို တဲလ်အဗစ်မြို့ကနေ ဗိုင်သွလ်မုက္ကဒ်တ်စ်မြို့သို့ ရွှေ့ပြောင်းမယ်လို့ ယခင်က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
Inews-0046/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » GEO TV
ဟောလီဝုဒ်နာမည်ကျော်မင်းသမီး လင်ဆေးလိုဟန် မွတ်စ်လင်မ်ဖြစ်နေပြီလား?
16.1.17 Hollywood , Lindsay Lohan , သတင်း , အနုပညာ , နိုင်ငံတကာ
မိမိရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ Alaikum salam လို့ ရေးသားပြီး ပို့စ်အဟောင်းတွေအားလုံး ဖျက်ပစ်လိုက်တဲ့ မင်းသမီး လင်ဆေးလိုဟန်
ဟောလီဝုဒ်နာမည်ကျော်မင်းသမီး လင်ဆေးလိုဟန်ဟာ မိမိရဲ့ Instagram အကောင့်မှာ “အတ်စ္စလာမုအလိုင်ကွမ်း” လို့ ရေးသားထားပြီး သူမရဲ့ကျန်ပို့စ်အဟောင်းတွေအားလုံးကို ဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။
လိုဟန်က Instagram အကောင့်ပေါ်ကနေ ဓာတ်ပုံဟောင်းတွေအားလုံးကို ဖယ်ရှားပစ်လိုက်ပါတယ်။
ဒါတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သူမဟာ မွတ်စ်လင်မ်တစ်ဦးအဖြစ်နဲ့ ဘဝစာမျက်နှာအသစ်ဖွင့်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ လူတွေက ထင်ကြေးပေးနေကြပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်လောက်ကတည်းကစပြီး မင်းသမီး လင်ဆေးလိုဟန်ဟာ အစ္စလာမ်သာသနာကို စိတ်ဝင်စားလာခဲ့သူ တစ်ဦးပါ။
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီလလောက်က သူမဟာ အစ္စလာမ်သာသနာကို လေ့လာနေပြီဆိုတဲ့ သတင်းတွေတက်လာခဲ့ပြီးနောက် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ သူမရဲ့ ဓာတ်ပုံဟာ အွန်လိုင်းမှာ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပါသေးတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူမကိုယ်တိုင်ကလည်း ဟုတ်မှန်တယ်ဆိုတာကို ထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။
လင်ဆေးလိုဟန်ဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတုန်းက တူရ်ကီနိုင်ငံမှာ ဆီးရီးယားရွှေ့ပြောင်းသူ တစ်ဦးထံက လက်ဆောင်ရရှိခဲ့တဲ့ ပုဝါကိုခြုံလျက်နဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ လူမှုကွန်ယက်မှာ ပို့စ်တင်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒေလီးမေးလ်သတင်းဌာနရဲ့ အဆိုအရ အသက်သုံးဆယ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဟောလီဝုဒ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီး လင်ဆေးလိုဟန်ဟာ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ မွတ်စ်လင်မ့်ယဉ်ကျေးမှုကို လေ့လာဖို့အတွက် ဒူဘိုင်းကို ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်။
ပြီးတော့ အဲဒီမှာ ကိုယ်ပိုင် ကုန်ထုတ်စက်ရုံတည်ထောင်ဖို့လည်း ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
လင်ဆေးဟာ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကစပြီး မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကနေ လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
Inews-0045/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » GEO TV
ကအ်ဗဟ်ကျောင်းတော်ပေါ်မှ လေယာဉ် ဘာကြောင့် မပျံနိုင်ရတာလဲ?
16.1.17 Saudi Arabia , သုတအထွေထွေ
မက္ကဟ်ရွှေမြို့တော်မှာရှိတဲ့ ကအ်ဗဟ်ကျောင်းတော်ပေါ်ကနေ လေယာဉ်တွေဖြတ်ပြီး မပျံသန်းတဲ့ အကြောင်းရင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမျိုးမျိုး ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အခုတော့ ဆော်ဒီနိုင်ငံရဲ့ လေကြောင်းရေးရာဌာနက ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဟစန်ဂါမိဒီက ကအ်ဗဟ်ကျောင်တော်ပေါ်ကနေ လေယာဉ်တွေ မပျံသန်းနိုင်တဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းတွေကို ရှင်းပြလိုက်ပြီး တစ်ချို့မှားယွင်းတဲ့ အယူအဆတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဟစန်ဂါမိဒီဟာ မိမိကိုယ်ကို လေကြောင်းရေးရာကြီးကြပ်ရေးမှူးတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း ဦးစွာမိတ်ဆက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကို ဖြန့်ချိခဲ့ပြီး ဗီဒီယိုထဲမှာ ၄င်းက ကအ်ဗဟ်ကျောင်းတော်ပေါ်ကနေ လေယာဉ်ပျံတွေ မဖြတ်သန်းကြခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်က အဓိက အကြောင်းအရင်းတွေကို ရှင်းပြထားပါတယ်။ အဆိုပါ ဗီဒီယိုဖိုင်ဟာ လူမှုကွန်ယက်တွေမှာ အတော်လေး ပျဲ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်။
ကအ်ဗဟ်ကျောင်းတော်ပေါ်မှာ သံလိုက်စက်ကွင်းရှိနေတဲ့အတွက် ကအ်ဗဟ်ပေါ်ကနေ လေယာဉ်တွေ ပျံဝဲလို့ မရတာဆိုတဲ့ အယူအဆနဲ့ ကျောင်းတော်ပေါ်မှာ လေလှိုင်းကွာဟချက်ရှိနေတဲ့အတွက် လေထုမှာ လေယာဉ်ပျံဝဲလို့ မရတာဆိုတဲ့ အယူအဆတွေကို အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေလို့ ဆိုပြီး ဟစန်ဂါမိဒီက ပယ်ချခဲ့ပါတယ်။
လေယာဉ်မပျံသန်းနိုင်တဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းကို ဟစန်ဂါမိဒီက အခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုတော့ လေယာဉ်ပျံတက်ဖို့အတွက် အရှိန်ယူ ပြေးလမ်းဟာ သိပ်ကိုနီးကပ်လွန်းနေတာကြောင့် အွမ်ရဟ်နဲ့ ဟဂ်ျဝတ်ပြုခရီးသည်တွေကိုလည်း ထိတ်လန့်စေပြီး အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရစေပါတယ်။
ဟစန်ဂါမိဒီက ဆက်လက်ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ မက္ကဟ်ရွှေမြို့တော်က မြင့်မြတ်တဲ့ ကအ်ဗဟ်ကျောင်းတော်တည်ရှိရာ အနီးဝန်ကျင်ဒေသဟာ ဆော်ဒီဥပဒေအရ လေယာဉ်ပျံသန်းခွင့်မပြုတဲ့ ဇုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မြင့်မြတ်တဲ့ ဟရာမ်နယ်နိမိတ်ဟာ မွတ်စ်လင်မ်တွေအတွက်ပဲ သီးသန့် ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးသိတဲ့ အတိုင်းပဲ မက္ကဟ်မြို့တော်ကိုဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ ကုန်းလမ်းဝင်ပေါက်တွေရှိပြီး အဲဒီလမ်းကြောင်းတွေကတစ်ဆင့် မက္ကဟ်မြို့တော်ဆီ မွတ်စ်လင်မ်တွေကိုပဲ သီးသန့် ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြင့်မြတ်တဲ့ နယ်နိမိတ်အပေါ်က ဆော်ဒီနိုင်ငံပိုင်နက်ရဲ့ လေထုမှာလည်း ဥပဒေဟာ ဒီအတိုင်းပဲ သက်ရောက်စေပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ မက္ကဟ်မြို့တော်မှာ လေယာဉ်ကွင်း မရှိတာလည်း အားလုံးအသိပါပဲ။ ဒါကြောင့် လေကြောင်းကလာတဲ့ ဟာဂျီတွေနဲ့ အွမ်ရဟ်လုပ်သူတွေဟာ မက္ကဟ်နဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ဂျိစ်ဒဟ်လေဆိပ် ဒါမှမဟုတ် မဒီနဟ် လေဆိပ်က နေတစ်ဆင့် မက္ကဟ်မြို့တော်ကို သွားရတာကြောင့် လေယာဉ်တွေဟာ မက္ကဟ်မြို့ပေါ်ကနေ ပျံသန်းရတာမျိုးလည်း ဖြစ်မလာတော့ပါဘူး။
ကအ်ဗာကျောင်းတော်ကြီးရဲ့အမိုးပေါ်ကို တာဝန်ပေးထားသူအချို့ တက်ရောက်ပြီး ဂိလာဗ်လို့ခေါ်တဲ့ လွှမ်းခြုံလွှာကြီးကို လဲလှယ်ကြတာမျိုးနဲ့ သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်တာမျိုးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ငှက်သတ္တဝါအချို့လည်း ပျံဝဲလေ့ရှိပါတယ်။
GKM-002/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » سكاي نيوز عربية
ရှိုင်ခွလ်ဟဒီးဆ် မောင်ဝ်လာနာ စလီမွလ္လာဟ်ခါန်းဆပ် ကရာချိမြို့၌ ကွယ်လွန်
16.1.17 Pakistan , ဝမ်းနည်းမှတ်တမ်း , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
အစားထိုးမရနိုင်သော ကမ္ဘာ့ကြယ်တစ်ပွင့် ဆုံးရှုံးရခြင်း
ဝိဖာကွလ်မဒါရိစေ့ အရဗီယဟ် (ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ကျောင်းပေါင်းစုံ တစ်ပြေးညီ အရဗီသင်ရိုးညွှန်းတမ်း ပညာရေးအဖွဲ့) ဥက္ကဋ္ဌကြီး ရှိုင်ခွလ်ဟဒီးဆ် မောင်ဝ်လာနာ စလီမွလ္လာဟ်ခါန်းဆပ်ဟာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ကရာချိမြို့မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။
မောင်ဝ်လာနာ စလီမွလ္လာဟ်ခါန်းဟာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ ထူးခြားပြောင်မြောက်တဲ့ အဓိပတိ သာသနာ့ပညာရှင်ကြီးတွေထဲက တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာသခင်ကြီးဟာ အလွန်နာမကျန်းဖြစ်နေခဲ့တဲ့အတွက် ဆေးရုံမှာ ဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ ဆရာသခင်ကြီး မောင်ဝ်လာနာ စလီမွလ္လာဟ်ခါန်းဆပ်ဟာ ရှိုင်ခွလ်အစ္စလာမ် ဟဇရသ်မောင်ဝ်လာနာ စိုင်ယိဒ် ဟုစိုင်းန်အဟ်မဒ် မဒနီ نور الله مرقده ရဲ့ မွန်မြတ်လှတဲ့ အကျော်အမော် တပည့်ရင်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ မုဖ်သီ မုဟမ္မဒ်သကီး အွဆ်မာနီဆပ်ရဲ့ဆရာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျမီအသွလ်အိုလမာဥက္ကဋ္ဌ မောင်ဝ်လာနာ ဖဇ်ွလွရ်ရဟ်မာန်အပါအဝင် မြောက်မြားစွာသော သာသနာ့ ပညာရှင်ကြီးတွေဟာ မောင်ဝ်လာနာ စလီမွလ္လာဟ်ခါန်းဆပ် ကွယ်လွန်သွားတဲ့အပေါ် အလွန်ကြေကွဲစွာဖြင့် ဝမ်းနည်းမှုကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြရင်း ဆရာသခင်ကြီးရဲ့ သာသနာရေး၊ ပညာရေးနဲ့ သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ကျိုးပမ်းခဲ့ပုံများကို ဖော်ကျူးခဲ့ကြပါတယ်။
မောင်ဝ်လာနာ စလီမွလ္လာဟ်ခါန်းဆပ်ဟာ ၎င်းရဲ့ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတော်အပေါ်ရော သာသနာအပေါ်ပါ ရာစုနှစ်ဝက်လောက်အထိ ဆက်တိုက်ဆိုသလို မိမိဘဝရဲ့ အချိန်များစွာကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ များများပြားပြား ပေးဆပ်ထမ်းရွက်ခဲ့သူ ဖြစ်တယ်လို့ မုဖ်သီမုဟမ္မဒ်နအီးမ်ဆပ်အနေနဲ့ ၎င်းရဲ့ဟောကြားမှုတစ်ခုမှာ ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဆရာသခင်ကြီး ကွယ်လွန် သေဆုံးသွားရခြင်းဟာ အာလင်မ်သာသနာ့ပညာရှင်ကြီးများရော အေလင်မ်ကျောင်းတွေအတွက်ပါ ယသီးမ် အဖမဲ့ ဘဝကို ရောက်ရှိသွားသကဲ့သို့ ကြီးမားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ရစေပါတယ်။
Inews-0044/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » GEO TV
ပဲရစ်မြို့တော်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ ယနေ့စတင်ကျင်းပပြီ
15.1.17 France , Israel , Palestine , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
အစ္စရေး-ပါလက်စ်တိုင်း အငြင်းပွားမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံတစ်ရပ်ကို ဒီကနေ့ ပဲရစ်မြို့တော်မှာ စတင်ကျင်းပနေပါတယ်။ အဆိုပါညီလာခံဟာ အစ္စရေးတို့ဘက်ကနေ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် တိမ်းညွတ်ဘက်လိုက်လေ့ရှိတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ သမ္မတသစ် ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကို သတိပေးအချက်ပြတဲ့ သင်္ကေတတစ်ခုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ညီလာခံရဲ့ အဓိကအမြင်တွေ၊ ရည်ရွယ်ချက်တွေမှာတော့ အုပ်ချုပ်မှုကြီးနှစ်ရပ်ကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ ဦးစားပေးထားပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လက်တွေ့ဖော်ဆောင်ရာမှာ လက်ရှိထက် ပိုမိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်ပြီး ပြုလုပ်လာနိုင်ဖွယ် ရှိနေပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့ ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ခံ ဗိုင်သွလ်မက္ကဒိစ်သို့ အမေရိကန်သံရုံး ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကနေ တားမြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါညီလာခံမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး လူမှုအဖွဲ့အစည်းအပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်း (၇၀) လောက်က ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာတော့ အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် နေတန်ယာဟုဟာ အဆိုပါညီလာခံကျင်းပခြင်းကို ပထမဆုံးအနေနဲ့ အကျိုးမရှိတဲ့ အလဟဿဖြစ်စေမယ့် ကြိုးပမ်းခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ညီလာခံရဲ့ အခြေခံရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှာ စစ်ပြိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးနှစ်ခုပုံစံအဖြစ်နဲ့ ကြုံကြိုက်နေရတာတောင် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကို သမ္မသစ်ဒေါ်နယ်ထရမ့်ဆီ အမှာပါးခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံအဖွဲ့အစည်း၊ ဥရောပနဲ့အရဗ်နိုင်ငံ စုစုပေါင်း (၇၀) ကျော်လောက် တက်ရောက် ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ညီလာခံမှာ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကို အမေရိကန်သံရုံးအား တဲလ်အဗစ်ကနေ မတရားကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ခံ ဗိုင်သွလ်မက္ကဒိစ်ဒေသကို ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုမှာ နစ်နာစေနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကိစ္စကို ရပ်တန့်ဖို့ ဖိအားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတသစ် ဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာ အမေရိကန်သံရုံးကို အဆိုပါ ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အတွက် ပြင်သစ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးက “ ညီလာခံကနေ ထရမ့်ကို ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်မျိုး မချမှတ်ဖို့ ထင်ထင်ပေါ်ပေါ် သတင်းစကားပါးလိုက်တာပါ ” လို့ ပြောဆိုသွားပါတယ်။
အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် နေတန်ယာဟုကတော့ အစောပိုင်းကတည်းက ယင်းညီလာခံကို ဆန့်ကျင်သပိတ်မှောက်ထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
Inews-0043/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » GEO TV
ကမ္ဘာသိ မြန်မာ့သမိုင်းပညာရှင်ကြီး ဇေယျကျော်ထင်ဗိုလ်မှူးဘရှင် (၁၀၁) နှစ်မြောက် အခမ်းအနား
15.1.17 ပြည်တွင်း , သတင်း
မြန်မာနိုင်ငံစာရေးဆရာသမဂ္ဂနဲ့ပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့ ကမ္ဘာသိ၊ မြန်မာ့သမိုင်းပညာရှင်ကြီး ဇေယျကျော်ထင် ဗိုလ်မှူးဘရှင် (၁၀၁) နှစ်မြောက် အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ တော်ဝင်နှင်းဆီခန်းမ (သီရိခန်းမဆောင်) မှာ ယနေ့ ၁၅-၁-၂၀၁၆ တနင်္ဂနွေနေ့ နေ့လယ် (၂း၀၀) နာရီကနေ ညနေ (၅း၀၀) နာရီထိ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ ဇေယျကျော်ထင်ဗိုလ်မှူးဘရှင်အကြောင်း အနည်းငယ် ဖော်ပြပေးပါမယ်။
[info title="သမိုင်းသုတေသီ ဗိုလ်မှူးဘရှင်" icon="info-circle"]
မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးသည့်နောက် ပြည့်စုံသော မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းစာစောင်ပြုစုရေးသားရန် လိုအပ်သည့်အပြင် နိုင်ငံ၏သမိုင်းအချက်အလက်များ ရှာမှီးစုဆောင်းရန် အရေးကြီးသည်ကို နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ဂရုပြုမိသောကြောင့် လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းကော်မရှင်တစ်ရပ်ကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးက (၁၉၅၅) ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၆) ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။
အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမှာ ပညာမင်းကြီး စည်သူဦးကောင်းဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်(၉)ဦးတို့မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာထင်အောင်
ကျောင်းသုံးစာအုပ် ထုတ်ဝေရာဋ္ဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးဝန် ဦးသိန်းဟန် (ဆရာဇော်ဂျီ)
ဝန်ကြီးချုပ်၏ အတွင်းဝန် ဦးသန့်
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခ ဦးဘညွန့်
ကထိက ဒေါက်တာ ကျော်သန့်
ဆရာအတတ်သင်ကျောင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးဝန် ပါမောက္ခ ဦးဘ
စစ်ရုံးမှ ဇေယျကျော်ထင် ဗိုလ်မှူးကြီး ဘရှင်
ပြန်ကြားရေးဌာန ညွှန်ကြားရေးဝန် ဦးယော (ဆရာဇေယျ)
အမှတ်စ(၈)ယောက်မြောက်အဖွဲ့ဝင် ဇေယျကျော်ထင် ဗိုလ်မှူးကြီး ဘရှင်က ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်များ၊ သမိုင်းသုတေသနပညာရှင်များ၏ ချစ်ခင်လေးစားမှုကို ခံရသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ သမိုင်းသုတေသန ပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သူ၏ရာထူးအဆင့်ကို အလေးမထား သုတေသနအလုပ်တွင် မွေ့လျော်ပျော်ပိုက်ကာ ရိုးသားနှိမ့်ချစွာ နေတတ်သူမို့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့် မိတ်ဆွေများက ဗိုလ်မှူးဘရှင်ဟူ၍သာ ချစ်စနိုး ခေါ်ခဲ့ကြသည်။
ဆရာရင်းဖြစ်သူ ဆရာကြီးလူးစ် (Prof. G.H.Luce) ကိုယ်တိုင်က သူပြုစုရေးသားသော Old Burma, Early Pagan အမည်ရှိ ဂန္တဝင်စာအုပ်ကြီး၏ အမှာစာတွင် တပည့်ဖြစ်သူကို လေးလေးစားစား လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေဖြင့် ဖော်ပြကာ တစ်ရင်းတစ်နှီး ဗိုလ်မှူးဟူ၍သာ ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းထားလေသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် တပည့်ဖြစ်သူ၏ ရာထူးအဆင့်နှင့် အမည်ကို တိုင်းတစ်ပါးသမိုင်းလေ့လာသူတို့ သိရှိစေလို၍ My colleague bohmu (Colonel Ba Shin) since, 1955 when he joined Burma Historical commission…. ဟု ရေးသားခဲ့လေသည်။
ဗိုလ်မှူးဘရှင်သည် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝတွင် စာပေလောကနှင့် ထိတွေ့နီးစပ်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်ရောက်ပြီး ဝိဇ္ဇာအငယ်တန်းကျောင်းသားဘဝမှ (၁၉၄၁) နှစ်တိုင်အောင် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာနှင့် သူရိယသတင်းစာတို့၏ ယုဒသန်ကျောင်းတိုက် (Judson College) တက္ကသိုလ်သတင်းထောက်အဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး သတင်းနှင့်ဆောင်းပါးများကို ရေးသားခဲ့သည်။
(၁၉၆၀) ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၆) ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းကော်မရှင်ကို ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အငြိမ်းစားပါမောက္ခချုပ် ဆရာကြီး ဦးဖေမောင်တင်အား တင်မြှောက်၍ အဖွဲ့ဝင်အသစ်တချို့ဖြင့် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခဲ့ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းအနေဖြင့် ဆရာဦးသိန်းဟန်၊ ဆရာဦးဘညွန့်၊ ဒေါက်တာကျော်သက် (၃)ဦးသာကျန်၍ အဖွဲ့ဝင်သစ်များအဖြစ် ဆရာကြီးလူးစ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဘာသာပြန်နှင့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရာဌာန စာသင်မှူးဦးဝန် (မင်းသုဝဏ်)၊ ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာသာလှ၊ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ဒေါ်သင်းကြည်၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သားရေစည်သူ ဗိုလ်မှူးကြီး ဘသန်း၊ ရာထူးအရ ပညာမင်းကြီး ရှေးဟောင်း သုတေသန ညွှန်ကြားရေးဝန်တို့ ပါလာကြပါသည်။
ကြီးလေးလှသော တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရန် သမိုင်းခေတ်အပိုင်းအခြားအလိုက် ဆပ်ကော်မရှင်(၅)ခုကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ဆပ်ကော်မရှင်(က)ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆရာကြီးလူးစ်က ဆောင်ရွက်၍ ပုဂံမင်းဆက်ဆုံးသည့် (အေဒီ ၁၃၆၅) ခန့် အထိ အရှေ့ပိုင်းခေတ်ကို တာဝန်ယူသည်။ ဇေယျကျော်ထင် ဗိုလ်မှူးဘရှင် ဦးစီးသော ဆပ်ကော်မရှင်(ခ)က (အေဒီ ၁၃၆၅) မှ (၁၇၅၂) အလယ်ပိုင်းခေတ်ကို တာဝန်ယူပါသည်။ ဆပ်ကော်မရှင် (က) ဥက္ကဋ္ဌ ပါမောက္ခ ဂျီအိတ်(ခ်ျ)လူစ်သည် ဆပ်ကော်မရှင် (ခ) ဥက္ကဋ္ဌ ဇေယျကျော်ထင် ဗိုလ်မှူးဘရှင်၏ အကူအညီဖြင့် တရုတ်အထောက်အထားစာရင်းများကို ပြုစုနိုင်ခဲ့ပါသည်။
သမိုင်းကော်မရှင်သည် သူ၏ အဓိကလုပ်ငန်းကြီးနှစ်ရပ်ဖြစ်သော ပြည့်စုံသော မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းစာစောင်ရေးသားပြုစုခြင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းအချက်အလက်များ ရှာမှီးစုဆောင်းခြင်းတို့ကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေစဉ်အတောအတွင်း ကော်မရှင်၏ သုတေသနအရာရှိများနှင့် ကျမ်းပြုအရာရှိများ၏ သုတေသနဆောင်းပါးများကို အဓိကဖော်ပြရန် ဖြစ်ပါသည်။
စာစောင်အဖွဲ့ဝင်ငါးဦးတွင် ဗိုလ်မှူးဘရှင်သည် တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး အတွဲ(၁)၊ စာစောင်(၁)တွင် ပွတ်တိုက်မင်း ဆုတောင်းလင်္ကာကို ဇေယျကျော်ထင် ဗိုလ်မှူးဘရှင်အမည်ဖြင့် သုတေသနဆောင်းပါး ရေးသားခဲ့ပါသည်။ ဗိုလ်မှူးဘရှင်သည် မြန်မာ့သမိုင်းဆိုင်ရာ၊ ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာ၊ တိုင်းရင်းသားရိုးရာစာပေနှင့် ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ်ဆောင်းပါးပေါင်း မြောက်မြားစွာကို (၁) ကင်းထောက်မောင်၊ (၂) စံအောင်၊ (၃) ဗိုလ်မှူးဉာဏ၊ (၄) တိုင်း ၄ ရဲဘော်ဟောင်း၊ (၅) မောင်ပင်တည်၊ (၆) ဦးဘရှင်၊ (၇) ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီးဘရှင်၊ (၈) ဝရီးစံ၊ (၉) သုတေသီ၊ (၁၀) ဇေယျကျော်ထင်ဗိုလ်မှူးဘရှင်၊ (၁၁) ဘရှင်စသည့် ကလောင်အမည်ကွဲများဖြင့် ရေးသားခဲ့ပါသည်။
အစ္စလာမ်သာသနာကို သက်ဝင်ယုံကြည့်သူတစ်ဦးဖြစ်သည့်အလျောက် အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာကောင်စီ၏ အန်စွာရီသင်တန်းများကို မြန်မာနိုင်ငံ ဒေသအဖွဲ့သင်တန်းများ အမှတ်စဉ် (၁) မှ (၂၈) အထိ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဦးဆောင်ပါဝင်ပို့ချခဲ့သည်။ ဗိုလ်မှူး၏ အထင်ကရလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ရပ်မှာ ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် နှစ် (၁၄၀၀) ပြည့်ကို ဦးစီးဦးဆောင် ကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် အစ္စလာမ်သာသနာရေးကောင်စီဌာနချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် သူ၏ နောက်ဆုံးအချိန်အထိ ဆောင်ရွက်သွားခဲ့ပါသည်။
ဤကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ သမိုင်းသုတေသီ ဗိုလ်မှူးဘရှင်သည် (၁၉၇၀) ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်နေ့၊ ညနေ ၅း၅၀ နာရီတွင် နှလုံးရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်ခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကြီးမားသော ဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ရပ် ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။
ဒီစာတမ်းဟာ ဒီကနေ့ကျင်းပခဲ့တဲ့ အဆိုပါ ဇေယျကျော်ထင်ဗိုလ်မှူးကြီးဘရှင် (၁၀၁) နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားမှ ဆောင်းပါးရှင် ဒလဘန်းရေးသားသည့် အမှတ်တရ စာအုပ်မှ ကောက်နုတ်ဖော်ပြရေးသားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Mnews-002/17 © အလင်းမျက်ဝန်း
facebook [110 K]
► December 2016 (147)
▼ January 2017 (97)
ကမ္ဘာသိ မြန်မာ့သမိုင်းပညာရှင်ကြီး ဇေယျကျော်ထင်ဗိုလ်...
ပဲရစ်မြို့တော်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ ယနေ့စတင်ကျင...
ရှိုင်ခွလ်ဟဒီးဆ် မောင်ဝ်လာနာ စလီမွလ္လာဟ်ခါန်းဆပ် ကရာ...
ကအ်ဗဟ်ကျောင်းတော်ပေါ်မှ လေယာဉ် ဘာကြောင့် မပျံနိုင်ရ...
ဟောလီဝုဒ်နာမည်ကျော်မင်းသမီး လင်ဆေးလိုဟန် မွတ်စ်လင်...
အစ္စရေး ပါလက်စ်တိုင်း နှစ်နိုင်ငံ ပြေလည်ရေး ဒေါနယ်ထ...
တူရ်ကီမှာ ဒေါ်လာ(၁)သန်းဖိုး အိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်ရုံ...
တေးဂီတဟာ စာရိတ္တပျက်ပြားစေမှုအကြောင်းခံနှင့် ပျက်စီး...
ဆရာဝန်များ လက်ရေး ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးသားရန် ဘင်္ဂလ...
သာသနာ့ပညာရှင်ကြီးတစ်းပါး အာဖရိကတွင် တရားဟောကြားနေစ...
အိန္ဒိယမှာ မွတ်စ်လင်မ်မိန်းကလေးတွေကို ဖြားယောင်းလှည...
မွတ်စ်လင်မ်အမျိုးသမီးငယ်လေးရဲ့ ပုဝါကို ဆွဲချွတ်ဖို...
အိုဘားမား၏ နောက်ဆုံးချမှတ်သော ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ဂွါတာ...
အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ ဒေါက်တာဇာကိရ်နိုက်အပေါ် ထိုးနှက်မှုတ...
ပါကစ္စတန်က မွတ်စ်လင်မ်ကောင်လေးနဲ့ ဂျပန်မလေးတို့ရဲ့ ...
ဆော်ဒီကို ကာကွယ်ခြင်းသည် မိမိနိုင်ငံကို ကာကွယ်ခြင်...
ဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ သမ္မတသစ်ကျမ်းကျိန်ပွဲအခမ်းအနားကို ဆေ...
ကမ္ဘာကျော် ဟောင်ကောင် ကွန်ဖူးမင်းသား ဂျက်ကီချန်းကေ...